November 2012 ~ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
အေမွာင္ၾကားက ဗမာျပည္ (အနီးေခတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈသမိုင္းအက်ဥ္း ၁၉၄၈- ၂၀၀၀)
စာအုပ္မွတ္တမ္း စာအုပ္အမည္ – အေမွာင္ၾကားက ဗမာျပည္ (အနီးေခတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈသမိုင္းအက်ဥ္း ၁၉၄၈- ၂၀၀၀) စာေရးသူ – ဝင္းတင့္ထြန္း ထ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မြန်မာနိုုင်ငံမှာ အဂတိလိုက်စားမှုတွေ အခုထိရှိနေသလို ကောင်းမွန်တဲ့ အစိုးရနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ရဖို့ လိုအပ်ချက်တွ...
KNU ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးက စစ်မှန်တဲ့ ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနဲ့ လက်...
တိုင်းရင်းသား ဒေသများ၌ အစိုးရ တပ်အင်အား တိုးချဲ ့နေဆဲ
မြန်မာပြည် တိုင်းရင်းသားများ ဓါတ်ပုံ - (အင်တာနက်) အစိုးရ တပ်မ...
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (မကဒတ) နောက်ခံသမိုင်း
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (မကဒတ) All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF) (၁) မကဒတ ၏ နောက်ခံသမိုင်...
ဒီ ၂၆ ရက်နေ့ KIA နှင့် အစိုးရ တိုက်ပွဲအခြေအနေများ
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်မော်ခရိုင် ဒေါ့ဖုန်းယန်မြို့နယ် ခန်းကိုင်တောင် ပေါ်ရှိ အစိုးရ၏ အမြောက်တပ်ဖွဲ့တို့သည် ကေအိုင်...
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်အခြေစိုက် လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးဦးဆောင်တဲ့...
ဒေါကလူ လက်ရှိကေအင်ယူ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တာမလာဘော ကရင်အမျိုးသားများ၏ ပထမဦးဆုံး ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အမျိုးသားရေး အဖွဲ့အစည်းမှာ ဒေါကလူ ဖြစ်သည်။...
Friday, November 30, 2012 မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
(ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေများပါတီ (၁၀)ပါတီမှ ခေါင်းဆောင်များအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှ)
ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဆင့်(၃)ဆင့်ချမှတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအဆင့်ဟာ ပြည်နယ်အဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်နယ်အဆင့်မှာ နှစ်ဖက်ရန်လိုမှုတွေနဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရပ်စဲဖို့၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းသဘောတူ ထားတဲ့ နယ်မြေဒေသတွေမှာပဲ နေထိုင်ကြဖို့၊ ယင်းသတ်မှတ်နေရာမှအပ ကျန်နေရာဒေသများကို သွားရောက်လိုလျှင် လက်နက် ကိုင်ဆောင်ခြင်းမပြုဘဲ သွားလာဖို့၊ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းသဘောတူထားသည့်နေရာများမှာ ဆက်ဆံရေးရုံးတွေ ဖွင့်လှစ်ထားရှိဖို့၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်မယ့်နေရာ၊ အချိန်၊ နေ့ရက်တွေ ညှိနှိုင်းသတ်မှတ် နိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ မပါသေးပါဘူး။ ဒီအဆင့်ကို ပြီးမြောက် အောင်မြင်ဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ်လိုလားတဲ့ စိတ်ရင်းစေတနာပဲ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရပ်စဲပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူလိုက်တဲ့ အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအဆင့် ကတော့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာဆွေးနွေးရမယ့်အချက်တွေ ကတော့ ပြည်ထောင်စုကနေ ဘယ်တော့မှ ခွဲမထွက်ဖို့၊ ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို လက်ခံဖို့၊ စီးပွားရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများမှာ နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်တဲ့ ဆေးဝါးများ တိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ ထူထောင်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ဖို့၊ လွှတ်တော်တွင်းရောက်ရှိလာလျှင် အခြားသော တိုင်းရင်းသားများနှင့် အကျေအလည် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖို့၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ တစ်ခုတည်းသော လက်နက်ကိုင် တပ်မတော်အဖြစ် ရပ်တည်ရေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ စတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းပြီး သဘော တူညီချက်ရရှိပြီဆိုရင် တတိယအဆင့်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တတိယအဆင့်မှာတော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေစတဲ့ နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ အဓိကကျတဲ့ Political Player တွေအားလုံး ပါဝင်တဲ့ ဤလွှတ်တော်ကြီးမှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလွှတ်တော်ကြီးအတွင်းမှာပဲ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မဖြစ်မနေ ဆောင်ကြဉ်းမယ့် သန္နိဋ္ဌာန်ကို ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ စိုက်ထူကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင်ကို တက်လှမ်းကြရာမှာ နိုင်ငံတော်လည်း ပန်းတိုင်ရောက်၊ တိုင်းရင်းသားတွေလည်း ပန်းတိုင်ရောက်၊ နိုင်ငံသားအားလုံးလည်း ပန်းတိုင်ရောက်စေဖို့ အပြန်အလှန် နားလည် ယုံကြည်မှု၊ တန်းတူရည်တူရှိမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတဲ့ ဒေါက်တိုင်ကြီး(၃)ရပ်နဲ့ တည်ဆောက် သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အများဆန္ဒနဲ့သဘောတူပြင်ဆင်ပြီး မိမိတို့ရဲ့လိုလားချက်တွေ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက် သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဆင့်(၃)ဆင့်ဟာ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မယ့် နိုင်ငံတော်ရဲ့လမ်းပြမြေပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလမ်းပြ မြေပုံကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေ၊ စက်မှုဇုန်တွေ၊ ပြန်လည်နေရာချထားမှုနဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်တည်ဆောက်မှုတွေ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စတဲ့ လူမှုအဆောက်အအုံတွေ စတဲ့ နည်းဗျူဟာများစွာ ပါဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး အရိပ်အာဝါသ အောက်ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေ သိက္ခာရှိရှိ ရပ်တည်နိုင်တဲ့အထိ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရနဲ့အတူ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သေနတ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေ လက်ပ်တော့ကိုင်ပြီး ထည်ထည်ဝါဝါရပ်တည်နေနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဝိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်းသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာ ပြည်တွင်း ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၊ ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေ ဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုပြီး ဘက်စုံထောင့်စုံ ဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရရဲ့ ခံယူချက်ဖြစ်တဲ့ တန်းတူညီမျှရေးနဲ့အညီ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်း တစ်ရာကျော် မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကြီးဟာ ဒီ Diversity ကြန်အင်လက္ခဏာတွေကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ မြှင့်တင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကချင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဝက်သက်ရောဂါ အဖြစ်များနေ
Thursday, November 29, 2012 မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် မှတ်တိုင် ၆ ရှိ ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ၁၂ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များ ဝက်သက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု ပြန့်နှံ့လာသဖြင့် ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးပေးနေရသည်ဟု ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO မှ ဒုက္ခသည်များ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး တာဝန်ခံက ပြောသည်။
နိုဝင်ဘာ လဆန်းပိုင်းတွင် တဦးစ နှစ်ဦးစသာ ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်း ၄ဝ ကျော်ထိ ကူးစက် ပြန့်ပွားခဲ့သ
ဖြင့် KIO ကျန်းမာရေးဌာနမှ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က သွားရောက်၍ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့ရသည်ဟု အရပ်ဘက်အရာရှိ ဦးဒွဲပီဆားက ပြောသည်။
“ကလေးတွေမှာ တော်တော်ပြန့်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်သေဆုံးတာတော့ မရှိဘူး။ ကျနော်တို့ ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးတယ်၊ ဆေးဆရာတွေ ထပ်ဖြည့်ပြီး။ ကာကွယ်ဆေး မထိုးရလို့ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု မဇ္စျိမကို
ထိုစခန်းတွင် ဒုက္ခသည် ၈ဝဝ ကျော် ရှိနေသည်။
တိုက်ပွဲဒဏ်ကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသော ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များမှာ ကာကွယ်ဆေးများ မထိုးနိုင်၍ ယခုကဲ့သို့ ကူးစက်ပြန့်ပွားရခြင်း ဖြစ်ပြီး ဝက်သက် ရောဂါသည် အလွယ်တကူ ကူးစက်နိုင်ကာ ရောဂါ ပြင်းထန် လာပါက အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်လာနိုင်သဖြင့် အမြန်ဆုံး ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရန် လိုအပ်သည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝက်သက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကို ယခုနှစ် မတ်လအတွင်းမှ စတင်၍ ၁ဝ ရက်ကြာ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် အသီးသီးတွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNIFEF နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO တို့က ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။
တရုတ်နယ်စပ် မိုင်ဂျာနယ်ရှိ ပါကထောင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် အဓိကအားဖြင့် အနွေးထည်၊ စောင်နှင့် ကလေးငယ် များ၏ ဖိနပ်နှင့် ခေါင်းစွပ်များ လိုအပ်နေသည်ဟု သိရိသည်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော အစိုးရနှင့် KIO တပ်များအကြား တိုက်ပွဲများကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရသော ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၉ သောင်းကျော် ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးနှစ်ပေါင်း ၆၀ ကြာအထိ မငြိမ်းချမ်းသေးတာဟာ ယုံကြည်မှု မတည်ဆောက်နိုင်သေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း” ဆိုတဲ့ အစည်းအဝေးတရပ်ကို သျှမ်းလူမှုအဖွဲ့အစည်း တွေက ဦးဆောင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းရှိ တော်၀င်နှင်းဆီ ခန်းမမှာ နို၀င်ဘာ ၂၆ ရက်ကနေ ၂၈ ရက် အထိ ၃ ရက်ကြာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီ ၃ ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ သျှမ်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်း ၄ ဖွဲ့ ကိုယ်စား လှယ်များ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအခြေစိုက် သျှမ်းလူမှု အခြေပြု အဖွဲ့ အစည်း ၁၁ ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြို့နယ်ပေါင်း ၄၂ မြို့နယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အထူး ဖိတ်ကြားထားသည့် ပညာရှင် ၁၇ ဦး စုစုပေါင်း ၁၇၀ ဦး တက်ရောက်တဲ့ ဒီအစည်းအဝေးမှာ ဘာတွေအထူးပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသလဲဆိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် နန်းဝိုးဆိုင် ကို သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာနက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထား ပါတယ်။
မေး။ ။ နို၀င်ဘာ ၂၆ ရက်ကနေ ၂၈ ရက်နေ့ထိ ၃ ရက်ကြာ ကျင်းပသွားတဲ့ အစည်းအဝေးက ဘာအစည်းအဝေးလဲ။ ဘာကြောင့် ပြုလုပ်ရပါသလဲ။ ဖြေ။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်တဲ့ အစည်းအဝေးပါ။ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ဘာကြောင့် မငြိမ်းချမ်းသေးသလဲ။ ကျမတို့ သျှမ်းတိုင်းရင်းသားဒေသမှာလည်း မအေးချမ်းသေးဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ပြန်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ရင် လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဆူပူမှုတွေ ဖြစ်လာတယ်။ နှစ် ၆၀ ကျော်ပြီ မငြိမ်းချမ်း သေးဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးတာလည်း မအောင်မြင်ဘူး။ ဘာကြောင့်မအောင်မြင်သလဲဆိုရင် တယောက်နဲ့တယောက်၊ လူမျိုးတမျိုးနဲ့တမျိုး၊ အဖွဲ့တဖွဲ့ နဲ့တဖွဲ့ ယုံကြည်မှု မရှိကြသေးလို့ဘဲ။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရမယ်။ ယုံကြည်မှု မရှိရင် ဘယ်လိုဘဲ ဆွေးနွေးဆွေးနွေး မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်း စာချုပ်မှာ အပစ်ရပ်ဖို့ လက်မှတ်ထိုးပြီးပြီ။ ဒါပေမဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတုန်း။ ယုံကြည်မှု မရှိလို့။ ယုံကြည်အောင်လည်း လုပ်ဆောင်တာ မရှိသေးလို့။ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေရယူဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးဖို့ ပြုလုပ်ရတာပါ။
မေး။ ။ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုဆွေးနွေးပါသလဲ။ ကျေနပ်အားရမှု ရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ စစ်တပ်၊ ပါတီ၊ လူမှုအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ စာပေ/ယဉ် အဖွဲ့၊ ပြည်သူ စတဲ့ အဖွဲ့ပေါင်းစုံ က လာကြတယ်။ အားလုံးကိုရောပြီး အုပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးကြတယ်။ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဖို့ အတွက် အဖက်ဖက်က ပါ၀င်ရမယ်။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စသဖြင့် ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်တာကို ဆွေးနွေးတယ်။ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ အသိပညာရှင် အတတ်ပညာ ရှင်တွေလည်း သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြတယ်။ အဖြစ်မှန် အမြင်မှန် ကိုသိပြီး ယုံကြည်မှုရအောင် ဘယ်လို လုပ်သင့်သလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးကြတယ်။ ယုံကြည်မှုရှိရင် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ဖို့ လွယ်သွားမယ်။
မေး။ ။ အစည်းအဝေးမှာ အဆင်မပြေတာတွေ နားလည်မှု မရတာတွေ ရှိလား။
ဖြေ။ ။ မရှိပါဘူး။ သျှမ်းပြည်က သျှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေ သာမက ကချင်ပြည်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းက သျှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေ၊ ပြည်ပက သျှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေလည်း လာတက်ကြတယ်။ ဆွေးနွေးရတာ အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်။ အတွေ့အကြုံတွေက ခပ်များများ ဆင်တူနေကြတော့ ပြောရဆိုရတာ နားလည်မှုရှိကြတယ်။ နားလည်လွယ်တယ်။
မေး။ ။ အာဏာပိုင်တွေ နှောင့်ယှက်တာတွေ ရှိလား။
ဖြေ။ ။ မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းလည်း လာတက်ပြီး ဒီလိုအစည်းအဝေးမျိုး ရှိသင့်တာကြာပြီ။ နောက်နောင်လည်း ဒီလိုအစည်းအဝေးရှိမယ်ဆိုရင် ကူညီပေးမယ် လို့ ပြောသွားတယ်။
မေး။ ။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်နှောင်ပိုင်းမှာ ဒီလိုအစည်းအဝေးဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ သျှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေ တွေ့ဆုံတဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်လို့လည်း မမှားဘူး။ ဒါကြောင့် အမျိုးသားရေး အတွက် ဘာတွေများ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်မလဲဆိုတာ နည်းလမ်းရှာဖွေတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်တာကြောင့် ဘာမှမဆုံးဖြတ်ပါဘူး။ အချက်အလက်တွေ ယူလာပြီး ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးတာပါ။ အဖက်ဖက်က လာရောက်ဆွေးနွေးပြီး ဒီလိုလုပ်သင့်တယ်၊ ဒီလိုပြုပြင်သင့် တယ်ဆိုပြီး အကြံပေးတာကို နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့၊ တိုးတက်ဖို့ ယူသုံးနိုင်အောင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ နောက်နောင်မှာလည်း ဒီလိုအစည်းအဝေး လုပ်ပါအုံးမယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်တာကြောင့် ဆွေးနွေး ရမဲ့ခေါင်းစဉ်တွေလည်း များတယ်။ အချိန်လည်း သိပ်မရတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ အဆင့်ထိတော့ မရောက်ဘူး။ နောက်နောင်ဆိုရင် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိ ရောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မေး။ ။ သျှမ်းတပ်ဖွဲ့ဆိုလည်း ၂ဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ရှိတယ်၊ သျှမ်းပါတီဆိုရင်လည်း ၂ ဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ရှိတယ်။ ပြည်သူ တွေက သူတို့ကို ပေါင်းစည်းစေချင်ကြတယ်။ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာများ ပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒါလည်းဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ အစည်းအဝေးမတိုင်ခင် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့လည်း သျှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေ နေထိုင်တဲ့ဒေသကို သွားရောက်ပြီး ဆန္ဒကောက်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်က လက်နက်ကိုင်တပ်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံရေးပါတီဘဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကို ပေါင်းစည်း စေချင်ကြတယ်။ မပေါင်းစည်းနိုင်ရင်လည်း ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြဖို့၊ နေရာ၊ တာ၀န်ခွဲဝေကြဖို့ ပြောကြတယ်။ ဒါကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပါ။
မေး။ ။ ဒီအစည်းအဝေးကနေ သျှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ စကားကို ပြည်သူတွေ သိရှိအောင် ဘာများမှာကြားချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒီအစည်းအဝေးမှာ ဒေသအသီးသီးက လူငယ်အဖွဲ့လည်း ပါ၀င်တယ်။ ကိုယ်စားလှယ် အသီးသီးလည်း လာတက်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့လည်း အချက်အလက်တွေကို ပြန်ပြောကြမှာပါ။ ပြည်သူတွေလည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ချစ်ကြဖို့၊ စိတ်ရှည်ရှည်ထားကြဖို့၊ မာနတွေ လျှော့ကြဖို့၊ တကိုယ်ကောင်းမဆန်ဘဲ အများအကျိုးအတွက် သယ်ပိုးဖို့၊ ပြည်ပမှာ ရောက်နေတဲ့ လူငယ်တွေလည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ပြန်လာပြီး တိုင်းပြည်အကျိုးသယ်ပိုးကြဖို့ အစည်းအဝေး တက်ရောက် ကြသူတွေအားလုံးက တောင်းဆိုကြပါတယ်။
၃ ရက်တာကာလ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်၊ လက်ရှိ သျှမ်းနိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ စာပေ ယဉ်ကျေးမှု၊ သယံဇာတနှင့် သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာများ၊ သျှမ်းလူမျိုးများနေထိုင်ရာဒေသများတွင် ရာစုနှစ်တဝက်ကြာ ခံစားနေရသော နိုင်ငံရေးပြဿနာများ ပကတိအခြေအနေများကို စာတမ်း ၂၃ စောင်ဖြင့် တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ စာတမ်း ၂၃ စောင်အပေါ် အခြေခံပြီးတော့ အစည်းအဝေးတက်ရောက်တဲ့လူတွေက ခေါင်းစဉ်အလိုက်အုပ်စုခွဲပြီး သဘောထားပေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲမှာပြီးဆုံးတဲ့ရက်မှာဘဲ လူထုထံက ကောက်ယူထားတဲ့ ဆန္ဒသဘောထားစစ်တမ်းတွေရဲ့ အဖြေကို စုစည်းပြီး တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဖိုင်ကောင်းကျေးရွာသားများကို အစိုးရတပ်များမှ ဘုရားကျောင်းထဲတွင် အစာအငတ်ထည့်သွင်းထား
Wednesday, November 28, 2012 မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
မြန်မာအစိုးရတပ်မှ မီးရှို့ဖျက်ဆီးသော ပန်ဆိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စစ်ပြေးစခန်းများ။ ဓါတ်ပုံ - ကချင်သတင်းဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် ကြူကုတ်ပန်ဆိုင်းမြို့နယ် ဖိုင်ကောင်းကျေးရွာအနီးတွင် အစိုးရတပ်ဖွဲ့နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့(KIA)ကြား ယနေ့မနက်မှ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အစိုးရတပ်များသည် အနီးကျေးရွာသားများကိုကြိမ်းမောင်းကာ ကျေးရွာရှိခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းထဲတွင် သွင်းထားကြောင်းမျက် မြင်သက်သေများပြောသည်။
ဖိုင်ကောင်းကျေးရွာအနီး အစိုးရတပ် (ခလရ ၂၄၀) တပ်ဖွဲ့များနှင့် ကချင်လွပ်မြောက်ရေးတပ် ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (MHH) တပ်ဖွဲ့များ ယနေ့နံနက် ရ နာရီမှ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၀ နာရီချိန်ခန့်တွင် ကျေးရွာရှိ ပြည်သူများကို အတင်းအဓမ္မကြိမ်းမောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေ တစ်ဦး ကချင်သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
“အဲဒီရွာနားမှာ ဒီမနက် ရ နာရီကနေ ပစ်ခတ်ကြတာ။ ပြီးတော့ ရွာကလူတွေအားလုံးကို မောင်းပြီး ဘုရားကျောင်းမှာ ထည့်ထားတယ်။ ပြီးတော့ အစိုးရစစ်သားတွေစောင့်နေတယ်။ ရွာလူကြီးကိုတော့ ဖမ်းပြီး ရိုက်နှက် နှိပ်စက်ပြီးတော့ KIA စစ်သားတွေကို ခေါ်ပေး မခေါ်ပေးရင် မင်းတို့ရွာကို မီးရှို့လိုက်မယ်ဆိုပြီး ဒီနေ့ တနေ့လုံး ဆွဲခေါ်သွားတယ်။”
အစိုးရတပ်များသည် ရွာသူကြီးကို ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ပြီးနောက် ညနေပိုင်းတွင် ဘုရားကျောင်းတွင်း ပြန်လည်သွင်းထား ကြောင်း သိရသည်။
ဖိုင်ကောင်းအနီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန် အစိုးရဘက်မှ ၆ ဦးသေဆုံးပြီး အချို့မှာဒဏ်ရာရရှိကြောင်း ရှေ့တန်းမှ သိရှိရသည်။
ဖိုင်ကောင်းကျေးရွာသားများသည် ၎င်းတို့အနီးတဝိုက် တိုက်ပွဲမကြာခဏဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် တချို့ ရွာအနီး တရုတ်နယ်စပ်ဘက်တွင် တဲများပြုလုပ်ထားကာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီး စပါးနှင့် အိမ်တွင်း ပစ္စည်း များကို ပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ရာ ၎င်းတဲစခန်းများကိုလည်း အစိုးရတပ်ဖွဲ့့မှ ယနေ့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးပေးလိုက်ကြောင်း ဒေသခံများပြောသည်။
ဖိုင်ကောင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၆၂ ခုရှိပြီး လူဦးရေ ၄၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။ အစိုးရတပ်ဖွဲ့များက ထိုကျေးရွာသားများကို ဘုရားကျောင်းတွင် အစာရေစာ အငတ်ထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ၄င်းတို့သက်ဆိုင်သည့် ဒေသခံများက စိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်။
ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတရားတွေကို KNPP နှင့် လူထုခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေး
ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူထုအခြေပြုလူမှု အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီမှ အတွင်းရေးမှူးတို့ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတရားတွေကိုလွိုင်ကော်မြို့ နောင်ယား(ခ) ကက်သလစ်ဂရုဏာ ဓမ္မရုံမှာ နှစ်ရက်သာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မှုတွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီမှ အတွင်းရေးမှူး (၂) ဦးအောင်ဆန်းမြင့်က “ဒီလိုမျိုးဝပ့်ရှော့လာလုပ်တာက ဒီနေ့နိုင်ငံတော်ကပြောနေတယ်လေ ကျနော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ရွေ့လျားနေပါတယ်။ ဦးတည်နေပါတယ်။ အပြောင်းအလဲတွေသွားနေပြီဆိုတော့.. ဒီလိုရိုးရိုးလေးပြောလို့မရဘူး။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားနေပြီဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အနှစ်သာရတွေကို ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့လက္ခာဏာတွေကို ကျနော်တို့နိုင်ငံသားတွေက သိရှိဖို့လိုတယ်။ အဲဒါကြောင့်ကျနော်တို့ က ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲကိုလာရောက် ပြီးတော့ သင်တန်းတွေလုပ်တာဖြစ်တယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာသဘောတရားများကို လူထုမှ KNPP နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြစဉ် (ဓါတ်ပုံ-ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်))
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာ အတွေ့အကြုံတွေရှိကြတဲ့ အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေ ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပါရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ယခုလို ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ လူမှုအသင်းအဖွဲ့က ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဒီမိုကရေစီနှင့် သဘောတရားတွေ ၊ လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာသဘောတရားတွေကို ချပြဆွေးနွေးမှုကနေတဆင့် ကယားတပြည်နယ်လုံးရှိ ပြည်သူလူထုများ ဒီအခြေခံသဘောတရားတွေကို လေ့လာနိုင်ပြီး ဒီမိုကရေစီစနှစ်ကို သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်း ဆရာအောင်ဆန်းမြင့်က ဆက်ပြောပါတယ်။ ၎င်းက “ဒီတိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးမျှော်မှန်းထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့် ရှိတဲ့ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီး တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်က ကေအာန်ပီပီ တခုထဲနဲ့လုပ်လို့မရဘူး။ အားလုံးရဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ အသင်းအဖွဲ့တွေ ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးက ဒီအခြေခံသဘောတရားတွေကို သိပြီးမှပူးပေါင်းလုပ်မှပဲ ရနိုင်မယ်” လို့ပြောပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာသဘောတရားပညာရပ်တွေကို နယ်စပ်မှာ သင်တန်းပေးပြီးခဲ့သော သင်တန်းသား/သူတွေက ဆင့်ပွားသင်တန်းအဖြစ် ဒီးမော့ဆိုမြို့နှင့် ဖရူးဆိုမြို့တွင် ပြုလုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ လူထုတွေကို ဒီလိုပညာပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာလည်း ဒေသခံလူထုအခြေပြုလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကလည်း ပါဝင်ပံ့ပိုးကူညီဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဖရူဆိုမြို့နယ်မှ လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ ခူးလီးရယ်က “ဒါကတော့ပထမခြေလှမ်းပဲ လူထုနဲ့ကေအာန်ပီပီ Civil Society ကြားထဲမှာ ပြည်တွင်းထဲမှာ ပြုလုပ်တာက ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့အနေနဲ့ အများကြီး ဆက်သွားဖို့ သင့်တယ်။ ရှေ့ဆက်လုပ်ဖို့ အချိန်တခု အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲသိရသေးတယ်။ ခုနက အတွင်းရေးမှူး(၂)ပြောသလိုပဲ ဆက်သွားဖို့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ် ကျနော်တို့အနေနဲ့ ပံ့ပိုးပါဝင်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။
၎င်းတွေ့ဆုံပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ ၂၆ နှင့် ၂၇ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်သွားတာဖြစ်ပြီး ကေ့ထျိုးဘိုးလူမှုအဖွဲ့အစည်း ၊ ကယားဖူးနှစ်ခြင်းအဖွဲ့မှ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ ကက်သလစ် ကရုဏာအဖွဲ့ ၊ ကယားမူပွာ ၊ ကယားလူမှုရေးအဖွဲ့၊ ကန္ဒရဝတီလူငယ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)မှ အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်၊ ကယန်းအမျိုးသားပါတီ၊ ခိုးလျေဆိုတောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့၊ ကယားမြေသက်သေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ ၊ ဘုန်းတော်ကြီး ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ၊ ကိန္ဒီရာကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအဖွဲ့နှင့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP) တို့မှ အဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တို့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် ၏မိန့်ခွန်း (ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်၏ ဖေ့စ်ဘုခ်မှ ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်
28.11.2012 ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း တော်ဝင်နှင်းဆီ ခန်းမ မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ “ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းအခမ်းအနား” မှာ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် မှ ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံအမှာ
၅။ နောက်ဆုံးကျမှ သျှမ်းသီချင်း (သျှမ်းအလုပ်)
(3) သျှမ်းစာရေးထုံးကော်မရှင်အစည်းအဝေ (၁၉၆၉ )
(9) ဖြတ်သာသွာတယ်မနားတတယ် ၊ လူငယ်ခြေကျ ၊ စာခြောက်ရုပ်
Trust Building for Peace ဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြောရန်
ဒီ “ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေး” ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာ ကြတဲ့လူကြီးမင်းများကို “မင်္ဂလာပါ” လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်နေတတ်သလိုသက် တောင့်သက်သာနေကြပါလို့အရင်ဆုံး မေတ္တာ ရပ်ခံချင်ပါတယ်။
ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးဆိုတာ ပြောရတာလွယ်သလောက်လုပ်ရတာ သိပ်မလွယ်ကူပါဘူး။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ တော့ဒီလိုပဲယူဆပါတယ်။ အခုတွေ့နေကြတဲ့လူတွေဟာစေတနာကောင်းနဲ့ လာကြတဲ့သူတွေဆိုတာ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားနာတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အရှေ့တိုင်းသားခပ်များများရဲ့ အကျင့် တစ်ခုဖြစ်နေတာ ကြာလှပါပြီ။ ယုံကြည်မှုရှိလာဖို့ဆိုတာ အားနာတယ်ဆိုတဲ့ဘောင်ကျော်ဖြတ်ပီးမှသာဖြစ်နိုင်မှာပါ။ အခုလဲရောက်လာကြ
တဲ့လူကြီးမင်းများ ကျွန်တော့်ကို သီချင်းရေးသူတစ်ယောက်လို့သာ အကြမ်းဖျင်းသိထားကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖန်တီးဖြစ်အောင်လှုံဆော်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊ အခြေအနေတွေ၊ ပါ၀င်ပက်သက်ခဲ့တဲ့သက်ရှိ သက်မဲ့တွေကအစအားလုံးထိနားလည်သလားနားမလည်ဘူးလားဆိုတာ သိမှမသိဘဲ။ မှန်တယ်ထင်တာကိုပဲ ဦးစား ပေးရေးရတဲ့ ကျွန်တော့်မူရင်းဝိညာဉ် ၊ မူရင်းစိတ် ၊ မူရင်းကိုယ်တွေကိုကောပြသနိုင်မှ တော်ကာကျမှာပေါ့။ ဒါမှလူဦးရေ
၂၆ သန်းကျော်ကနေ သန်းပေါင်း ၆၀ ကျော်တဲ့အထိနေလာရတဲ့တစ်ယောက်သောသူကတော့ ဒီလိုဘဝမျိုးကိုဖြတ် သန်း ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာသိမှာကိုး။
ကျွန်တော်ရေးသားမဲ့ပုံစံက တောင်းခံထားတဲ့ပုံစံနဲ့ ကိုက်မကိုက် လိုက်မလိုက်တော့မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ မပိုပေမဲ့ဆိုင်နေတဲ့နိုင်ငံ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းကိုတော့ နဂိုကတည်းကယုံကြည် ၊ နဂိုကတည်းကလည်းထပ်တူနီးပါး ရည်မှန်းချက်ရှိလို့ ဝေဖန်တာတွေကိုခါးဆီးပီး ဝိညာဉ်ကော၊ စိတ်ကော၊ ကိုယ်ရော ခံနိုင်လည်းခံ မခံနိုင်လည်းခံရင်း ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ တေးရေးသူဘဝကိုကြိုးစားပြီးရယူခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ပါတီနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပီး “ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေး ” ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါ၀င်ပြောပြခွင့်ရလို့ အထူးကျေးဇူးတင်ရပါကြောင်း ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျား။
ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကတော့ သျှမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့ပါဘူး။ ကျောင်းနေတော့ နမ္မတူမြို့ ရဲ့ Our Lady’s Convent , မေမြို့ St. Albert’s High school စတဲ့ ခရစ်ယာန်သာသနာပြုကျောင်းတွေမှာနေခဲ့တော့ ဘိုကျောင်းတက်ပြီး ဘိုလိုပဲ ၀တ်ခဲ့ပါတယ်။ သျှမ်းဝတ်စုံကိုအစ်ကိုကြီးတို့ဝတ်တုန်းကလည်း ကြည့်ပြီးသိပ်မကြိုက်ခဲ့ဘူး ။ ဒါပေမဲ့ (၁၉၆၄) ကျောင်းတွေကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းတော့ နဂိုကတည်းက ကိုယ့်မြို့ကိုပဲခင်တွယ်တဲ့ကျွန်တော်ဟာ နမ္မတူအစိုးရတန်းမြင့်ကျောင်းကိုပြန်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်ဘာလူမျိုးလဲဆိုတာ တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင် တွေ့ရတော့တယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ တခြားသျှမ်းတွေကသျှမ်းဘောင်းဘီ ၊ သျှမ်းတိုက်ပုံ၊ အမျိုးသ္မီးတွေက သျှမ်းထဘီ ၊ သျှမ်းအင်္ကျီဝတ် လာကြတာကိုး၊ သူတို့ကတော့ဘာမှမပြောကြ၊ လေးစားသမှုပြုကြပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတစ်ယောက်ထဲ သျှမ်းတွေကြားမှာ ဘိုလိုဝတ်နေတော့ ရေရှည်မှာဘယ်နေနိုင်ပါ့မလဲ။ ကိုယ့်ပင်ကိုယ်စိတ်သဘောထားကလဲ လူကြားထဲမှာလိုက်လျော ညီထွေ နေချင်တဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့တော့ ကျွန်တော်လဲ သျှမ်းဝတ်စုံနဲ့ ဖြစ်သွားပြီပေါ့လေ။
နောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရတာကတော့ ကျွန်တော့ဘဝမှာရှမ်းလိုဝတ် သျှမ်းလိုပြောတတ်ရုံနဲ့ သျှမ်းမဟုတ်သေးဘူး ဆိုတာ ကို ထပ်မံပြသလိုက်သလိုဖြစ်ရပ်ပါ။ ၁၉၆၅ မှာကျောင်းမှာ နံရံကပ်စာစောင်လုပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ သျှမ်းဆရာ ဦးစိုင်းရွှေထွန်း ကနေ သျှမ်းကျောင်းသားတွေကိုသပ်သပ် အစည်းအဝေးခေါ်ပြီး သျှမ်းဘာသာနဲ့ သျှမ်းနံရံကပ်စာစောင် တစ်ခုလုပ်ဖို့ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရှိရမယ်ဆိုပြီးပြောတော့ အားလုံးသောကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ကျွန်တော့်ဖက်ပဲ လှည့်ကြည့်လာတော့ခက်ပြီပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပြဿနာကိုနောက်မှကြည့်ရှင်းမယ်ဆိုပြီး ခေါင်းဆောင်တာဝန်ကို လက်ခံလိုက်ပါတယ်။ နောက်မှပြင်ဦးလွင်မှာနေခဲ့တဲ့ အစ်ကိုဆီကြေးနန်းရိုက်ပြီး သျှမ်းစာအမြန်လာသင်ပေးဖို့ ပူစာ လိုက်ရတာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာသျှမ်းလိုဝတ် သျှမ်းစကားပြော၊ သျှမ်းစာရေးသားတတ်ပြီဆိုတော့ပြည့်စုံပြီလို့ထင်မိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့မကုန်သေးပါဘူး။ သျှမ်းထုံးစံအရ ဝါတွင်းအဖိတ်နေ့မှာ သျှမ်းလူငယ်မောင်မယ်တွေဘုန်းကြီးကျောင်း ကိုလာ ပြီး ဘုန်းကြီးတွေအတွက်ခဲဖွယ်၊ ရေနွေး၊ တရားနာမဲ့လူတွေအတွက်ရေနွးကြမ်း အကြော် ။ ဥပုသ်နေ့မှာဘုရားဆွမ်း တော်ကပ်ဖို့ ၊ ဘုန်းကြီးအာရုံဆွမ်း၊ ရေနွေးကော်ဖီ ၊ နေ့ဆွမ်း ၊ အသီးဖျော်ရည်များ ၊တရားနာသူတွေအတွက် နံနက်စာ နေ့လည်စာပြင်ဆင်ပြီးကျောင်းဝင်းသန့်ရှင်းရေးစတဲ့ ဝေယျာဝစ္စတွေလုပ်ကြရပါတယ်။
ပြောချင်တာက အဖိတ်နေ့ည ရှစ်နာရီ ကိုးနာရီ ရေနွေးအိုး ဟင်းအိုးတည်ရင်း စောင့်ရင်းဂီတာတီးတတ်သူတွေ (ညီစိုင်းခမ်းသီအပါအဝင်) က ဂီတာတီးပြီးရှမ်းသီချင်းတီးကြဆိုကြတာပေါ့လေ။ တနေ့လာလာလဲဒီသီချင်း (၂)ပုဒ် ၊(၃) ပုဒ် တနေလာလည်း(၂)ပုဒ် ၊(၃) ပုဒ်နဲ့ဆိုတော့ ခေါင်းဆောင်စိုင်းအုံးမြင့်ကို ကပ်ပြီးငါတို့ သျှမ်းသီချင်းဒါဘဲရှိတာလား ဆိုတော့ ဟုတ်တယ်။ တခြားဟာတွေလဲ သျှမ်းနားနဲ့မကိုက်တော့ မကြိုက်ကြဘူးလို့ဆိုတယ် ။ ဒီမှာပဲ ကျွန်တော် ကတော့မပူပါဘူး St. Albert တုန်းကကြားဖူးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော် Beatles ရဲ့ သီချင်းတွေရှိသားဘဲ၊ အဲဒီ tune ယူပြီး သျှမ်းစာသားသွင်းလိုက်ရင် သျှမ်းလည်းဘာသားနဲ့ထုထားတာမို့လို့လဲ ကမ္ဘာကြိုက်သီချင်းတွေ ကြိုက်ရမှာပဲပေါ့။
ဒါပေမဲ့ တကမ္ဘာလုံးကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေဟာ သျှမ်းနားနဲ့ကျ မကိုက်ဖူး ဖြစ်နေတော့တစ်ပုဒ်ပြီးတပုဒ် ဘာသာပြန် နေတာနှစ်ဝက်တောင်ကျော်ခဲ့ပြီ၊ အဲဒါနဲ့ Pentatonic scale နဲ့ သီချင်းစပ်ရင်း ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ ၁၉၆၈ ကျမှ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ သျှမ်းကြိုက်နိုင်တဲ့ စာသားနဲ့သီချင်းပုံစံကိုရတော့တယ်။
“တို့သျှမ်းစကားကိုပြောပါ ဘာလို့လဲဆိုရင် တို့ကသျှမ်းမဟုတ်လား” စတဲ့ စာသားတွေပါတဲ့(သျှမ်းစိတ်ဓာတ်ရှိကြပါ) ဆိုတဲ့သီချင်းပါပဲ
၆။ တောင်ပေါ်မြေရဲ့ အခြားတစ်ဖက်မျက်နှာ
၉။ ဖြတ်သာသွားတယ် မနားတယ်
၁၁။ စာခြောက်ရုပ် အဲဒီသီချင်းတွေ အပါအဝင်ပေါ့။
အဲဒီနောက်ထပ်ပြီးဖော်ပြချင်တဲ့သီချင်းကတော့မီးရှူးခံသီချင်းပါပဲ။ရှမ်းမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ် အပျက်တစ်ခုခုကိုရည်စူးပြီး (သို့) အောင်ပွဲခံခြင်းတစ်ခုခုကိုရည်မှန်းပြီး Carol Singing ဆိုပြီးထွက်အလှူခံရပါတယ်။ အဲဒီလိုပွဲမျိုးက ပျောက်ကွယ် စပြုလာပြီမို့တောင်ကြီးမှာပြန်စရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးအစ်ကိုကြီးစိုင်းတုံခမ်းကခေါင်းဆောင်အစီအစဉ်လုပ်ပြီး ကျွန်တော်သီချင်းစပ်ဖြစ်သွားတာပါ။
(၁၉၆၉)ခုနှစ်ကပေါ့။ အဲဒီနှစ်မှာပဲတောင်ကြီးမြို့မှာ သျှမ်းစာပေညီလာခံကျင်းပတော့ကျွန်တော်ဟာမန္တလေး တက္ကသိုလ်များ ကိုယ်စားလှယ်လေ့လာသူအနေနဲ့ပါ၀င်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာသီချင်းနှစ်ပုဒ်သုံးပုဒ်သီဆိုခဲ့ပါတယ်။
(------------ ) အဲဒီမှာစပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သီချင်းကတော့ (---------) "တိုင်းပြည်လောက်ကြီးတဲ့ ကျီကြီးရှိပေမယ့် ဆန်မရှိရင် ဘာလုပ်ရမှာလဲ" ဆိုတဲ့သီချင်းအဓိပ္ပာယ်က " အပြင်အကာအရံအလှအပ တွေကိုပဲအလေးထားလုပ်ကြပေမယ့် အတွင်းကျတာတွေဘာမှမထူထောင်မတည်ဆောက်ပေးရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲ" ဆိုတာပါပဲ။
သျှမ်းမှတ်မိတယ် ( )
"တည်နေရာကတောထဲမျက်မည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မြင့်မားတဲ့တောင်ကြီးတွေလူမျက်စိနဲ့ မမြင်ရသေးတဲ့အချိန် သံလွင် မြစ်ကိုဘယ်သူမှမဖြတ်ကျော်နိုင်သေးတဲ့အချိန် . . . အဲဒီအချိန်ကစပြီး သျှမ်းမှတ်မိတယ်။ ဒို့အဖိုးအဖွားတွေ ရဲ့အရိုး တွေ လဲဖုန်မှုံ့ဖြစ်ခဲ့တယ် ၊ ချွေးတွေသွေးတွေနဲ့လယ်ယာကိုကျွေးဖို့ရေလုပ်ခဲ့တာပေါ့။ ဆက်နွယ်ထားတဲ့ အသက်ပေါင်း များစွာနဲ့မျိုးစေ့ချခဲ့တာပါ။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး သျှမ်းမှတ်မိတယ်။ မြေကြီးဟာ စောလာသူတွေအတွက် ရှိနေသေးတဲ့ အချိန်မှာဘယ်သူငြင်းနိုင်မှာလ။ သျှမ်းကအရင်ကျတယ်ဆိုတာ . . . သျှမ်းမှတ်မိတယ်ဖြစ်လာသမျှတွေ သျှမ်းမှတ်မိတယ် . . . သျှမ်းပြည်တစ်ပြည်လုံးသာမကနိုင်ငံဝေးရောက်သျှမ်းတွေပါနှစ်သက်တဲ့သီချင်းပါ။
အဲဒီသီချင်းကိုရေးချင်နေတာကြာလှပါပြီ။ နောက်ဆယ်နှစ်အကြာမှာခွဲထွက်ခွင့်ရလို့ခွဲထွက် ချင်ရင်ပေါ့လေ . . . အဲဒီ အတွေးဟာတစ်ဘဝလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားသလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုကောင်းအောင် စိတ်ဝင်စားလာအောင်ရေးရမလဲ ဆိုတာစဉ်းစားမရခဲ့ဘူး။
ဒါပေမယ့်ထူးထူးခြားခြား သျှမ်းကာတွန်းတစ်ပုဒ်ကို တွေ့လိုက်ပြီးအတွေးရ လာတာပါ။ အဲဒီကာတွန်းထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ် ကြေးရုပ်ရဲ့အိပ်ထောင်ကိုလူတစ်ယောက်ကနှိုက်ပြီး ‘သေသေချာချာရှာကြည့်ပါဦး’ လို့နောက်တစ်ယောက်ကပြောနေ တာပါ။အဲဒါနဲ့ပဲ ‘ဆယ်နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပါပြီ။ သျှမ်းပြည်ကြီးလည်းပြန်မရသေးပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ပါသွားပြီထင်တယ်။ ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ ပင်လုံစာချုပ်ရယ် ‘လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့သီချင်းကို ရေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၁ လောက်ကထင်ပါတယ်။ စာပေစီစစ်ရေးက ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်လို့ ယနေ့ထက်တိုင် ထုတ်ဖော်ပုံနှိပ်ခြင်းသီဆိုခြင်း မပြုခဲ့ရပါဘူး။ မိုးကုတ်မှာထင်တယ်။ တစ်ခါတော့ဆိုပြခဲ့ဖူးပြီး ကျန်တဲ့သူတွေရ သွားသီဆိုသွားကြတာပါ။ သျှမ်းပြည်က လူတွေရူးသွပ်ခဲ့တဲ့သီချင်းပါပဲ။
A place beyond dream,
Where what dream is what has been,
A thought for onself persued,
Turns out for all living things
သျှမ်း ၊ မြန်မာ ၊ အင်္ဂလိပ် (၃)ဘာသာနှင့်ရေးစပ်ခဲ့ပြီးပို့ကဒ် ၊ ပိုစတာ ၊ တီရှပ်များထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင်ကျင်လည်တာများနေပါပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အစ်ကိုကတော့ GTI မှာဝင်ရ တော့သူနှင့်တစ်ခါအလည်လိုက်သွားမိတယ်။ မန္တလေး ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကမီးတိုင်ကြီးတွေကို အစ်ကိုက ' ဒီလျှပ် စစ်မီးတိုင်ကိုကြည့်ထားနော်။ အဲဒါကလောပိတကထွက်ပြီးရှမ်းပြည်ကိုဖြတ်ပဲဖြတ်သွားတာ။ ဘာမီးမှလဲမပေးဘူး’ ဆိုပြီး ပြောတော့ ရေးဖြစ်လိုက်တဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။
မန္တလေးရောက်ပြီးဘယ်နေရာမှအဆင်မပြေနိုင်ဖြစ်နေသူရဲ့ဘဝကိုရည်ရွယ်ပြီးရေးသား ထားတဲ့ ကို့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက် သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါအဆုံးသတ်ကျတော့" ဘယ်လောက်နှိမ်ပေမယ့်လဲ မထူးတဲ့အကြောင်းကိုတော့ အချစ်နဲ့တိုင်းတာပြ လိုက်တယ်။ မန်းပျိုဖြူတစ်ယောက်ကို သျှမ်းချစ်လဲ ဗမာထက်မလျော့တာ တကယ်တမ်းပြခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ ငွေဂုဏ်မရှိတော့ယောက္ခမ မကြည် မအောင်နိုင်သေးတော့မိဘမကြည် မှီစရာခိုစရာမဲ့ ။ အိုနောက်ဆုံးတော့ မန္တလေးရောက် သျှမ်းတစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ဟာမလွယ်ပါလား။ ဒါပေမယ့်လဲ နေရာချင်းတော့ မလဲချင်ဘူး။ တောင်ပေါ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူချင်ပါတယ်။ အို….. မန္တလေးယောက်သျှမ်းတစ်ယောက်တော ပြုံးနေရီနေမြဲ
ဟိုတုန်းကတင်ဝင်း (ဆေး/မန်း) ကျွန်တော့်တို့အခေါ်အရတော့ကို Ronald Yin ပေါ့လေ သူပြောလေ့ရှိတဲ့စကား တစ် ခွန်း ပေါ့။ ကျွန်တော်ကတကယ်ကိုသဘောကျသွားတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့တက္ကသိုလ်တက်ပြီးအမျိုး ဘာသာ သာသနာ အတွက်ဘာမျှအသုံးမကျဘဲဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တက္ကသိုလ်ထွက်တွေအများကြီးတွေ့ဖူးပြီးသားဖြစ်နေတာကိုး။ ဒါနဲ့ပဲအဲဒီသီချင်းကိုရေးဖြစ်တာပါ။ ဆိုတဲ့သူရော တီးတဲ့သူရော အားလုံးကြိုက်ကြပြီး သီချင်းပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ Regional College တွေစတဲ့အချိန်နဲ့ ကွက်တိဖြစ်သွားလို့ ကျွန်တော်ကနှမျောတသစွာနဲ့ပဲပြန်နုတ် လိုက်ရတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။
အဲဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ နိုင်ငံခြားစာရေးဆရာကြီး Nathaniel Horthorne ရဲ့ဝတ္ထုတိုကို အကျဉ်းပြန်ရေးထားတဲ့ Feather Top ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြီး ရေးဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ဒီဝတ္ထုမှာစုုန်းမကြီးတစ်ယောက်ကနေ စာခြောက်ရုပ် တစ်ခုလုပ်ရင်းနဲ့ရုပ်သိပ်ချောသွားတဲ့အတွက်အသက်သွင်းပြီးလူပြည်ကိုသွားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူထင်သလိုအဆင်ပြေမလာဘဲ စာခြောက်ရုပ်ကသူ့တကယ့်အသွင်ကိုမှန်ထဲမှာမြင်ပြီးမှတ်မိသွားတဲ့အတွက်ပြန်လာတာကို စုန်းမကြီး ကတော့ နောက်ဆုံးတော့ လက်လျှော့ပြီး အစကတည်းကရည်ရွယ်ထားသလို ငါ့ပြောင်းဖူးခြံကိုသာ စောင့်ပေတော့လို့ လိုက်လျောခဲ့ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ဟိုတုန်းက ၁၉၇၂ - ၇၃ ခုနှစ်လောက်ကသီချင်းအဖြစ်ရေးသားပြီး ရွှေကြယ် ငွေကြယ် စတဲ့စကားလုံးတွေပါနေလို့ ဆင်ဆာကိုမတင်ဖြစ်လိုက်ဘဲချန်ထားတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ အခုအခွင့်သာလို့ပြန် တင်ပြရတဲ့သဘောပါ။
ကျွန်တော်စာရေးသူဘဝကတော့အဆင်မပြေမှုတွေကြားထဲကနေ အခကြေးငွေရယ်လို့ ရသင့်တာလဲမရ။ မရသင့်တာ ဆိုပိုဝေးပြီပေါ့။ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအထူးသဖြင့် ဝေဖန်တာကိုတော့တစ်ဖက်သက်ချည်းပဲခံပြီး ဆက်လုပ်လာ ရတာပါ။ ဒီကြားထဲမှာထွက်လာတဲ့သီချင်းတွေကို အားပေးနေကြတဲ့ပရိတ်သတ်ရဲ့အင်အားက ကိုးစားစောင့်မျှော်ရင်း နဲ့ဆက်ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အရေးကြီးတာကတော့ကိုယ်မှန်တယ်ထင်သရွေ့ကိုယ်ရေးနိုင်ခဲ့ရင်၊ သီချင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ပြီးတာ ပဲဆိုပြီး မျက်စိမှိတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ မျှော်လင့်ချက်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ပါစေနဲ့။ဘယ်တော့မှမပျောက်စေနဲ့ဆိုတဲ့ တစ်ခုတည်း သောရည်မှန်းချက်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာချမှတ်နိုင်ဖို့ပါပဲ။
သီချင်းရေးသမားဘဝကိုခံယူပြီး တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ခဲ့တာ ယနေ့ထက်တိုင်ပါပဲ။ ဒီအလုပ်က ပြီးသွားပြီ နားရပြီဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး ၊ ခုတော့ဒီအစည်းအဝေးကြီးက ယုံကြည်မှုသာ တကယ်တည်ဆောက်ပြီး ပေးစွမ်းခဲ့တယ်ဆိုရင် အားလုံး အတွက်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာတွေ တစ်ပိုင်းတော့ပြီးသွားနိုင်လောက်ပါတယ်။ ဖြစ်ပါစေလို့လဲ ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲ နိဂုံးချုပ် ပါရစေ။
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့ ကြတဲ့ ရှမ်းညီလာခံ ဟာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မှာ ပြီးဆုံးသွား ခဲ့ပါတယ်။
ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု စနစ်အတွက် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေအစား တိုင်းရင်းသားတွေ တန်းတူ အခွင့်အရေး ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းချက်တွေကို ရရှိမယ့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဥပဒေကို ပြဌာန်းနိုင်ဖို့ အများစုက သဘောတူကြတယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ဆေထင်က ပြောပါတယ်။
ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မှုဟာ ခွဲထွက်တာမဟုတ်ပဲ တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေးရရှိဖို့သာဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိအခြေအနေမှာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးပေးထားရုံ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်တွေပေးထားရုံနဲ့ မပြည့်စုံနိုင်ဘူးလို့ ဦးစိုင်းညွန့်လွင်က ပြောပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတွေ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇန္နဝါလ ၁၂ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး စစ်ပွဲတွေကို ငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုရင် မြန်မာစစ်တပ်ဟာ ကတိတည်ဖို့လိုတယ်လို့ ရှမ်းညီလာခံ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဦးခွန်ထွန်းဦးက ပြောပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေ မဖြစ်ဖို့အတွက် ကုလသမဂ္ဂတို့လို နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေက လာရောက်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အလှူပေးနေတဲ့ နော်ဝေတို့လိုနိုင်ငံတွေကလည်း အခြေအနေမှန်သိဖို့နဲ့ ထိရောက်အောင် ကူညီနိုင်ဖို့ အောက်ခြေအထိ သွားရောက်လေ့လာဖို့လိုတယ်လို့ ဦးဆေထင် ပြောပါတယ်။
အခုညီလာခံက ရှမ်းလူမျိုးတွေပဲ အဓိကစုဆုံကြတာဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ပအို့ဝ်၊ ပလောင်၊ ဝ၊ ကိုးကန့်တို့လိုတိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးပေါင်းပြီး စုပေါင်း ညီလာခံ လုပ်နိုင်ဖို့ကိုလည်း ကြိုးစားသွားမယ်လို့ ရှမ်းခေါင်းဆောင်တွေက ပြောကြားသွားပါတယ်။
၃ ရက်တာ ကျင်းပတဲ့ ဒီညီလာခံကို ရန်ကုန် မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပတာ ဖြစ်ပြီး ရှမ်းလက်နက်ကိုင် တပ် ၃ဖွဲ့၊ ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီ တွေနဲ့ ရှမ်းလူမှုရေး အဖွဲ့တွေက လူ ၃ဝဝ ကျော် စုံစုံညီညီ တက်ရောက်ခဲ့ကြ ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် နောက်ပြန်မဆုတ်ရန် ရှမ်းညီလာခံ တိုက်တွန်း
စံခလပူရီ (မဇ္စျိမ) ။ ။ ပဋိပက္ခများ လုံးဝ အဆုံးသတ်၍ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် အထူးလိုအပ်နေပြီး နောက်ပြန်မဆုတ်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ညီလာခံက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကြေညာလိုက်သည်။
‘ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲ’ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်သော ထိုညီလာခံကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမတွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှ စ၍ သုံးရက်တိုင် ကျင်းပခဲ့ခြင်း
“ပဋိပက္ခများ ဆက်မဖြစ်စေရန် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည့် အခင်းအကျင်းများကို မိမိတို့ ပါဝင်သည့် အနေအထားမှ အလေးအနက်ထား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် မိမိတို့ အားလုံး စုပေါင်းအားဖြင့် နောက်ပြန်မဆုတ်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်ကို နေရာအလိုက် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်သည့် အခြေအနေများ ရောက်အောင် အချင်းချင်း ပံ့ပိုးမှုများ လုပ်၍ အထူးတွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်သွားမည်” ဟု ညီလာခံအပြီး ထုတ်ပြန်သည့် သဘောထား
ညီလာခံသို့ ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီ ၃ ခု၊ ရှမ်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့နှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ အခြေစိုက် ရှမ်း လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်း ၁၁ ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြို့နယ်ပေါင်း ၄၂ မြို့နယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အထူးဖိတ်ကြားထားသူ ပညာရှင် ၁၇ ဦး အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၁၇ဝ ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရာတွင် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေးသည် အဓိကအချက် ဖြစ်၍ ယခု
ဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပရသည်ဟု ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ဥက္ကဋ္ဌ ခွန်ထွန်းဦး က ပြောသည်။
“လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အကြောင်းတရားထဲမှာ တိုင်းရင်းသား ပြဿနာက အဓိက ဖြစ်နေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား ပြဿနာ ပြေလည်နိုင်ဖို့ ဆိုရင် ဒီနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အတူ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး မရှိဘဲ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တန်းတူမှု မရှိဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေး မရှိနိုင်ပါဘူး” ဟု ညီလာခံ အဖွင့်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အငြိမ်းစား အင်္ဂလိပ်စာ ပါမောက္ခ ရှယ်လီ နန်းဟွမ်လိတ် ကလည်း “ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာ
ငွေကြေးနဲ့ ဝယ်ယူလို့ မရသလို အပေါ်ယံ ဟန်ဆောင်မှုနဲ့လည်း မရပါဘူး။ ရင်ထဲက လာတဲ့ ယုံကြည်မှုကသာလျှင်
ရေရှည် တည်တံ့မှာပါ။ တိုတိုပြောရရင် အပြောနဲ့ အလုပ်နဲ့ ညီပါစေ” ဟု ဆွေးနွေးပွဲ အဖွင့်အမှာစကားတွင်
ထို့အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်၊ လက်ရှိ ရှမ်းနိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ စာပေ ယဉ်ကျေးမှု၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှမ်းလူမျိုးများ နေထိုင်ရာဒေသများတွင် ကောက်ယူရရှိခဲ့သော
ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒသဘောထားနှင့် ရာစုဝက်ကြာ နိုင်ငံရေး ပြဿနာ၏ ဒဏ်ကို ခံစားနေရသည့် ရှမ်းလူမျိုးများ၏ အခြေအနေများ ပါဝင်သည့် စာတမ်း ၂၃ စောင်ကို တင်ပြခဲ့ပြီး တင်ပြချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ခေါင်းစဉ်အလိုက် အုပ်စုခွဲကာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ညီလာခံ ပထမနေ့တွင် ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP) နာယက စဝ်ဆေထဝ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ် (SNLD) ဥက္ကဋ္ဌ ခွန်ထွန်းဦး၊ ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (SNDP)၊ တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (TNDP)၊ ရှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS)နှင့် မိုင်းလား အထူးဒေသ ၄ (NDAA-ESS) မှ ကိုယ်စားလှယ်များက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားများ၏ လိုလားချက် ဖြစ်သည့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးကို အသားပေး ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပထမနေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိမ်းနှင့် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုး တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
SSPP နာယက ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စဝ်ဆေထင် ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားအရေးသည် ထပ်တူထပ်မျှ အရေးကြီးပြီး ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို တိုင်းရင်းသားများ လိုလားသည့် ဖက်ဒရယ် အခြေခံသည့် ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် အစားထိုးရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောသည်။
ညီလာခံ၏ ရလဒ်ကို ကျေနပ်ကြောင်းနှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရန် ခွန်အားဖြစ်ကြောင်း ခွန်ထွန်းဦး က ပြောသည်။
“ရှမ်းပြည်နယ်က အဖွဲ့အစည်းအားလုံး စုစည်းနိုင်တဲ့ အနေအထားကို တွေ့ရတယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆက်လုပ်သွား ရမှာပေါ့” ဟု မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
“အရင်တုန်းက ဒီလိုမျိုး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဘယ်ပြောလို့ရမလဲ။ အခုက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ခွင့်ပေးတယ်။ အနှောင့်အယှက် ဆိုတာလည်း ဘာမှ လုံးဝ လုံးဝ မရှိတော့ဘူး။ ကျနော်တို့ကလည်း ကောင်းစေချင်တဲ့ ဆန္ဒပဲလေ။ ရတာ မရတာ အပထားပေါ့” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
‘ရှမ်းပြည် အတိုင်ပင်ခံ ကောင်စီ’ ဖွဲ့စည်းမှုကြောင့် နိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်ဟု ဆိုကာ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလက ဦးခွန်ထွန်းဦး အပါအဝင် ခေါင်းဆောင် ကိုးဦးကို ဖမ်းဆီးပြီး ရှစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ် နှစ် ရဝ ကျော်မှ ၁ဝဝ ကျော်အထိ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအထဲမှ တဦးမှာ ထောင်တွင်းမှာပင် ကွယ်လွန် သွားခဲ့ရသည်။ ရှမ်းပြည် အတိုင်ပင်ခံ ကောင်စီ သည်လည်း အစိုးရ စေခိုင်းမှုကြောင့်သာ လုပ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးခွန်ထွန်းဦးက ဆိုသည်။
ယခုညီလာခံပြီးနောက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပါဝင်သည့် ညီလာခံကြီး်ကိုလည်း ဆက်လက်ကျင်းပသွားရန် အစီအစဉ် ရှိကြောင်းလည်း ခွန်ထွန်းဦး က ပြောသည်။
အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရန် ကချင် ပြည်သူ များ၏ ဆန္ဒ KIO ကောက်ခံမည်
မြန်မာ အစိုးရနှင့် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) တို့ အကြား ယခု နိုဝင်ဘာ လအတွင်း နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး နိုင်ရန် တရုတ် နိုင်ငံ ရွှေလီ ဆွေးနွေးပွဲ အတွင်း ဦးအောင်မင်း ကမ်းလှမ်း ထားသည့် အပေါ် လက်ရှိ ကျင်းပ နေသည့် ဗဟို ကော်မီတီ အစည်းအဝေး ပြီးနောက် တဆက် တည်း၌ပင် ကချင် ပြည်သူ လူထု များ၏ အမြင်များ ကောက်ခံ သွားရန် ရှိသည်ဟု KIO ဗဟို ကော်မတီဝင် တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
“ဗဟို ကော်မတီ အစည်း အဝေးတွေ လုပ်ပြီးနောက် ကချင် ပြည်သူ လူထု ဆန္ဒ ကောက်ခံဖို့ ရှိသေးတယ်၊ တွေ့ဆုံပွဲက နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံ ပွဲလေ၊ ကျနော်တို့ ကြီးပဲ ပြီးတဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး ဆိုတော့ ဒီလ အတွင်းတော့ တွေ့နိုင်မှာ မဟုတ် တော့ဘူး” KIO ဗဟို ကော်မီတီဝင် တစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
ထို့ကြောင့် ယခု နိုဝင်ဘာ လအတွင်း KIO နှင့် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် တို့အကြား နိုင်ငံရေး အရ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး နိုင်ရန်မှာ အလားအလာ မရှိတော့ဟု ဆိုနိုင် ပေသည်။
KIO ဘက်က နိုင်ငံရေး အရ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး နိုင်ရေးကို လိုလား နေသော်လည်း ဆွေးနွေးပွဲ အမြန် ပေါ်ပေါက် လာရန်မှာ မြန်မာ အစိုးရ၏ စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှု အခြေ အနေ အပေါ်နှင့် ကချင်ပြည်သူ လူထု များ၏ အဆုံးအဖြတ်၊ အမြင် သဘောထား များအပေါ်တွင် များစွာ မူတည် သည်ဟု KIO မှ ဆိုပါသည်။
အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ အစိုးရနှင့် KIO ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့တို့ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့တွင် တရားဝင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး ပြုလုပ် ခဲ့ပြီးနောက် နိုဝင်ဘာလ အတွင်း နိုင်ငံရေး အရ ထပ်မံ၍ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး နိုင်ရန် မြန်မာ အစိုးရ ဘက်မှ ကမ်းလှမ်း ထားခဲ့ပါသည်။ ထိုကိစ္စ အားလည်း KIO ဗဟို ကော်မတီ အစည်းအဝေး တွင်း တင်ပြ ဆွေးနွေး ပြီးနောက် အကြောင်း ပြန်ကြား ပေးမည်ဟု KIO ဘက်မှ ဆိုထား ပါသည်။
နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးကို KIO ဘက်မှ တောင်းဆို ထားသည့် အားလျော်စွာ မြန်မာ အစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး နိုင်ငံရေး အတွက် တစ်ဖက်၌လည်း အစိုးရ တပ်များ၏ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက် နေမှုများကို KIO ဘက်မှ ခုခံ နေရပြီး အခြား တဖက်တွင် မည်သည့် အချက်အပေါ် အခြေခံ၍ နိုင်ငံရေး အရ ဆွေးနွေး သွားမည်ကို ပြင်ဆင် နေရ သောကြောင့် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာ နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းဗဟို ကော်မီတီဝင်မှ ဆက်ပြောပါသည်။
KIO နှင့် အစိုးရ တို့၏ ရွှေလီ ဆွေးနွေးပွဲ မြင်ကွင်းပုံ (Photo - Min Zaw Oo)
ယမာန်နေ့ ကလည်း KIA တပ်မဟာ (၅) ဒေသသို့ တက်လာသော အစိုးရ တပ်အား KIA တပ်ရင်း (၂၅၁) တပ်ဖွဲ့မှ မိုင်းခွဲ၍ တိုက်ခိုက် ခဲ့သည်။ နှစ်ဖက် ထိခိုက် ဒဏ်ရာ မသိရသေးပါ ဟု KIA ဘက်က ဆိုပါသည်။
“မနေ့က မွန်းလွဲ (၁) နာရီ အချိန် လောက်ပေါ့၊ သူတို့ တပ်ဖွဲ့တွေ ကျနော်တို့ တပ်စခန်း အနီး ချဉ်ကပ် လာတော့ ကျနော်တို့ ဘက်က မိုင်းခွဲ တိုက်လိုက်တယ်။ သူတို့ ပြန်ဆုတ် သွားတော့ တိုက်ပွဲက ရပ်သွားတယ်” ဟု KIA စစ်ရုံးချုပ်မှ အရာရှိ တစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
လက်ရှိ ကျင်းပနေသည့် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ ဗဟို ကော်မီတီ အစည်းအဝေး ပြီးနောက် ကချင် ပြည်သူ လူထုများ၏ သဘောထား ကောက်ခံ ပြီးမှသာ နှစ်ဖက် တွေ့ဆုံနိုင်ရန်ကို ပြန်လည် ချိန်းဆို နိုင်လိမ့်မည်ဟု KIO ဘက်မှ မျှော်လင့်ကာ အတိ အကျ ထုတ်ဖော် ပြောကြားခြင်း မပြုခဲ့ပေ။
ချင်းပြည်နယ်အတွင်း တောင်ယာစပါးအထွက်နည်း၊ ၀မ်းစာအတွက် ဒေသခံများ စိုးရိမ်
Tuesday, November 27, 2012 မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
ချင်းပြည်နယ် အထက်ပိုင်း ထန်တလန်မြို့နယ် ဇာနတ်တောင်ကြောနှင့် မာရာ တောင်ကြော၊ မတူပီမြို့နယ်မရာရာဒေသ တလျှောက်ရှိ ကျေးရွာ ပေါင်း ၄၀ ကျော်မှ ဒေသခံများ တောင်ယာစပါး အထွက်နည်းနေသောကြောင့် ၀မ်းစာစပါး အတွက် ဒေသခံများစိုးရိမ်နေကြသည်ဟုသိရသည်။
၎င်းဒေသတွင် စိုက်ပျိုးထားကြသော စပါးများသည် ပြင်းထန်သော လေတိုက်ခတ်မှုများကြောင့် အကုန်နီးပါးပျက် စီးသွားသည့် အတွက် တောင်ယာ လုပ်ငန်းကို အဓိက မှီခိုအားထားနေရသော ချင်းဒေသခံရွာသားများသည် ယခုနှစ် တွင် တောင်ယာစပါးအနည်းငယ်ရိတ်သိမ်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကျေးရွာပေါင်း ၁၁ ရွာရှိသည့် ဇာနတ်တောင်ကြောတွင် ၁ ရွာလောက်ကသာ နှစ်ဝက်စာ ဆန်ရေ စပါးရရှိကြပြီး ကျန်သည့် ကျေးရွာများမှာ စပါးတောင် မရ ကြကြောင်း ဇာနတ်တောင်ကျောက ထန်ဇန်း ရွာ သားတဦးကပြောသည်။
“ ကျနော်တို့ရွာက အရင်နှစ်တွေမှာ တောင်ယာစပါးပုံး ၃ သောင်းလောက်ထွက်ရှိလေ့ရှိပေမဲ့ ဒီနှစ် မှာတော့ လေ အရမ်းတိုက်တာနဲ့ စပါးတွေပျက် ကုန်တော့ တရွားလုံးမှ ပုံး ရ၀၀ လောက်ဘဲရကြတယ်’’ ဟု အဆိုပါရွာသားကပြော သည်။
အလားတူ မရာတောင်ကြောတလျှောက်မှာရှိတဲ့ ကျေးရွာပေါင်း ၃၀ လောက်ဟာလည်း ရာသီ ဥတုဖောက် ပြန်မှုကြောင့် ယခုနှစ် စပါးအထွက် နည်းနေကြောင်း ဟားခါးမြို့အခြေစိုက် အပတ်စဉ် ထုတ် ဟားခါးပိုစ့်သတင်း အယ်ဒီတာ လာ အောမ်ပွီးယာက ပြောသည်။
“ တချိူ့ရွာဆိုရင်တော့ တအိမ်မှာ စပါး ၁၀ ပုံး ၁၅ပုံးရရှိကြတယ်၊ အခု စပါးရိုက်သိမ်းပြီးခါစဆိုတော့ သူတို့စားဖို့ကတော့ ကျန် သေးမှာပေါ့ ၊ ဒါပေ မယ့် နှစ်သစ် နွေရာသီ လောက်ဆိုရင်တော့ တော်တော် အခက်ကြုံရမယ့် အခြေအနေရှိပါ တယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တရွာလုံး အထွက်နှုန်းက ဒီလို ဆိုးနေတော့’’ ဟု သူကပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ်က ချင်းလူမျိူးအများစုသည် တောင်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်နေကြပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တောင် ယာစပါးများစိုက်ပျိူးကာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသောက်ရန် စုဆောင်း ထားလေ့ရှိသည်။
သို့သော်လည်း ယခုနှစ်မှာမူ ထန်တလန်မြို့နယ်က ဒေသခံအများစုမှာ ယခုကဲ့သို့ တောင်ယာစပါး အထွက်နည်းခြင်း ကြောင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသောက် ရန် စပါးစုဆောင်းထား နိုင်ခြင်းမရှိကြသည့် အပြင်၊ လာမည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် မိုးရာသီ မတိုင်ခင်တွင် စပါးပြတ်လပ်ဖွယ်ရှိနေသည် ဟားခါးပိုစ့် အယ်ဒီတာက ပြောသည်။
ယခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရ နှင့် ဒေသတွင်းအခြေစိုက် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများကလည်း ကွင်းဆင်းလေ့ လာမှု မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
အပစ္ခတ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ခ်င္းအမ်ိုးသားတပ္ဦး (စီအန္အက္ဖ္) ဟာ လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ အစိုးရျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပန္ေဆြးေနြးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေနြးပြဲတုန္းက သေဘာတူခ်က္ေတြကို ဆက္လက္ေဆြးေနြးသြားဖို့ လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္နဲ့ ၈ ရက္ေန့ေတြမွာ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ့ ရန္ကုန္ျမို့မွာ ေတြ့ဆံုမယ္လို့ ခ်င္းအမ်ိုးသားတပ္ဦးရဲ့ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာ ဆလိုင္းေ႐ြွႊခါးက ေျပာပါတယ္။
“အဓိကက ပထမနဲ့ ဒုတိယ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးပြဲမွာ သေဘာတူညီထားတဲ့အခ်က္ေတြကို ဘယ္လုိအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ ဆုိတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ သတ္မွတ္နယ္ေျမေတြ တိတိက်က်႐ွိဖို့၊ ဖြံ့ျဖိုးေရးကိစၥေတြလည္း ပါမယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္း အလုပ္လုပ္လိုတဲ့ အန္ဂ်ီအိုေတြ အစိုးရနဲ့ လက္မွတ္ထိုးတဲ့ MOU ေတြ ဘယ္လိုညွိၾကမလဲေပ့ါ။ ဥပမာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဖ်က္ဆီးမယ့္ဟာေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ့ ကုိက္ညီမႈမရိွတာေတြ ပါလာရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ့ ေျပာျပရမွာေပါ့။”
နိုင္ငံေရးေဆြးေနြးပြဲမွာ ျပည္သူ့ဆနၵေပၚ အေျခခံေဆြးေနြးသြားမွာျဖစ္ျပီး ျပည္သူေတြနဲ့ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးေရး ေကာ္မတီတရပ္ကို ျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လက ဖြဲ့စည္းခဲ့တယ္လို့ စီအန္အက္ဖ္က ေျပာပါတယ္။
ဒီတေခါက္ေဆြးေနြးပြဲမွာ ခ်င္းအမ်ိုးသားတပ္ဦးဘက္က အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ပူးဇင္က်ံုး ဦးေဆာင္တဲ့ ၂၁ ဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့ တက္ေရာက္မွာျဖစ္ျပီး အစိုးရဘက္က နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးေအာင္္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ျင္ိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ့နဲ့ ေဆြးေနြးမယ္လို့ ေဒါက္တာေ႐ြွႊခါးက ေျပာပါတယ္။
ခ်င္းအမ်ိုးသားတပ္ဦးဟာ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ့ ေတြ့ဆံုျပီးတဲ့ေနာက္ ခ်င္းနိုင္ငံေရးပါတီ တခုျဖစ္တဲ့ ခ်င္းအမ်ိုးသားပါတီနဲ့လည္း တရား၀င္ေတြ့ဆံုျပီး ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေတြ ေဆြးေနြးမယ္လို့လည္း သိရပါတယ္။
စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးေတြအတြက္ နွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ တိုက္ပြဲ၀င္္ခဲ့တဲ့ ခ်င္းအမ်ိုးသားတပ္္ဦးဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလက အစိုးရနဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီး ေမလထဲမွာ ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေနြးခဲ့ပါတယ္။
ေဆြးေနြးပြဲ သေဘာတူခ်က္ေတြအရ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတန္၊ မတူပီနဲ့ ထန္တလန္းျမို့ ေတြမွာ ဆက္ဆံေရးရံုး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။
နစက-BGB နယ်စပ်လုံခြုံရေး တိုးမြင့်ချထားမှု အရှိန်မြင့်မားလာ
မြန်မာ-ဘင်္ဂလာ နယ်စပ်မှတ်တိုင် အမှတ် ၅၀၊ ၅၁၊ ၅၂နှင့် အနီးတဝိုက်ရှိ နစက-BGBတို့အကြား နိုဝင်္ဘာ ပထမအပတ်က လုံခြံုရေး တိုးမြင့် ချထားမှု အရှိန်မှာ ပိုမိုမြင့်မားလာကြောင်း နယ်စပ်မှ သတင်းပေးပို့သည်။
ဘင်္ဂလာ အခြေစိုက် အမည်မသိ နက်လက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တဖွဲ့အနေဖြင့် နိုဝင်္ဘာ ၆ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်လမ်းများကို ပြုလုပ်နေသော GE တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အငိုက်မိတိုက်ခိုက်ရာ တစ်ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး ၃ ဦးမှာ ပြန်ပြေးဆွဲ ခံရမှုမှ ယခုကဲ့သို့ နယ်စပ်တင်းမာမှုမှ လုံခြံုရေးတပ်ဖွဲ့များ တိုးမြင့်ချထားမှု ပြန်လည်မရုပ်သိမ်းသေးဘဲ ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းအခင်းဖြစ်ပွားမှုကြောင့် မောင်တောမြို့နယ် နယ်မြေ ရ နစက- နတ်ချောင်းဆရီမြို့နယ် အခြေစိုက် BGB အမှတ် ၁၅ တို့အနေဖြင့် အရေးပေါ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်မှာ လေးကြိမ်တိုင်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း လုံခြံုရေးတင်းကြပ်ချထားမှု နှစ်ဘက်စလုံးမှ တိုးမြင့်လျက် ရှိနေကြောင်း ယင်းဒေသခံ မျက်မြင်များက အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
နစက-BGB တို့အနေဖြင့် ယင်းခြံုခိုပစ်သတ် ပြန်ပြေးဆွဲသွားသော အဖွဲ့မှာ RSO တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြောင်းနှင့် နစကအနေဖြင့် BGBအား ရှာဖွေအပ်နှံရန် အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကာ ပန်ကြားထားသော်လည်း ယခုအချိန်ထိ ဖေါ်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးချေ။
နစကအနေဖြင့် ပြန်ပြေးဆွဲခံ ယင်းတို့ GE တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးအား BGBက ရှာဖွေ၍ ပြန်လည်မအပ်နှံနိုင်င်လျှင် ဘင်္ဂလာပိုင်နက်တွင်းသို့ ယင်းတို့ကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက်ရှာဖွေမည်ဖြစ်ကြောင်း ကမ်းလှမ်းမှုများရှိကြောင်း နယ်စပ်သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
BGB အနေဖြင့် ယင်းတို့နတ်ချောင်းဆရီနယ်မြေရှိ ဒိုးဆိုးရီ၊ လီမော်ဆိုးရီ၊ အာဆာတိုလီနှင့် ဆာက်တာလား နယ်မြေများရှိ ဒေသခံများကို မေးမြန်းရှာဖွေခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် RSO မှ ယင်းနယ်မြေအပြင် နယ်စပ်ဒေသရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ရှိနေသဖြင့် ဒေသခံများမှာ စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ဒေသခံများက ပေးပို့သော သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
ဘင်ဒရိုဘင်ခရိုင် နတ်ချောင်းဆရီမြို့နယ် အခြေစိုက် BGB အမှတ် ၁၅ တပ်ရင်းမှူး မာဟာဘ်ဘူရ် ရော်ဟ်မာန် PSC က "ပြန်ပြေးဆွဲခံရတဲ့ မြန်မာ့စစ်တပ်ကသူတွေအတွက်ကြောင့် နှစ်ဘက်နယ်စပ်က စစ်တပ်လုံခြံုရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ခုချိန်ထိ နေ့ညအသင့် ရှိနေတုန်းပါဘဲ၊ လုံခြံုရေးတွေ အတွက်ပါ၊ အစောပိုင်းတော့ နယ်စပ်အနီးက လူထုတွေ လုံခြံုတဲ့နေရာဘက်ကို ရွေ့ပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။"ဟု ဒေသခံ သတင်းထောက်တဦးအား ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဒိုးဆိုးရီနယ်မြေမှ စေယမာန် အာဘ်ဒူ ရော်ဆိဒ်က "ပြဿနာအစတော့ စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်၊ အိမ်မရအထိပေါ့ဗျာ၊ သို့သော်လည်း BGBက အနီးအနားမှာ ရှိနေတော့ ဖြေသာပါတယ်။"ဟု ဆိုကြောင်း ယင်းဒေသခံသတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့ထားသည်။
မြန်မာအစိုးမရ ဘင်္ဂလာပိုင်နက်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား မောင်တောမြို့နယ်တွင် အခြေချပေးမည်ဟု တရားမဝင် ကောလဟလ သတင်းများ ပေးဆောင်ပြီး ခေါ်ဆောင်နေမှုသတင်းများကြောင့် တချို့မှာ သွားရောက်ဆက်သွယ် နေထိုင်သူများ ရှိနေသဖြင့် BGB အနေဖြင့် ယင်းသတင်းကြောင့် မကျေနပ်မှုများ စတင်ရှိလာနေသည်ဟု နယ်စပ်သတင်း တခုက ဆိုသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏မိန့်ခွန်း
ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ TBP (Trust Building for Peace) ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက် ခြင်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဘဲ ဦးတည်ဆွေးနွေးသွားမယ်။ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် သံသယ အာဃာတ မာန်မာန တရားတွေကို တဦးစီ တယောက်စီ လူတိုင်းက အရင်ပယ်ဖျက် စွန့်ပစ်နိုင်ပါမှ ယုံကြည်မှုတွေ တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ် တယ်။
SNDP ပါတီ၏မိန့်ခွန်းကို ဖတ်ကြားပေးသော ကျားဖြူပါတီလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး စိုင်းမောင်တင်
ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲဟာဖြင့် အလွန်အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲကြီးက ခိုင်မာတဲ့ အုတ်မြစ်ချနိုင်မှသာ ရှေ့ဆက် လျှောက်လှမ်းမှုရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သျှမ်းတိုင်းရင်းသားပါတီများဟာမူဝါဒ လမ်းစဉ်အနည်းငယ် ကွဲပြားတာကလွဲရင် ဦးတည် ချက်ပန်းတိုင်ဟာဖြင့်တခုတည်းဆိုတာ ယုံမှားသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအနေနဲ့ တန်းတူညီမျှမှု အပြည့်အ၀ရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မူ ဖက်ဒရယ်ကို အဓိကအခြေခံမူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ် အဖြစ် ခံယူ ကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မတူတာကို ဘေးဖယ်ပြီး တူညီတဲ့အချက်ကိုသာ ဦးတည်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ယုံကြည်မှုကို မလွဲမသွေတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဘဲကျန်တဲ့ သျှတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်း တွေဟာလည်း ထို့အတူ ကျင့်သုံး သွားမယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲ တက်လာ တဲ့အဖွဲ့ အစည်း အားလုံးဟာ လမ်းကြောင်း တခုတည်းပေါ် မလွဲမသွေ ရောက်ရှိ လာမှာဖြစ်ပြီး သျှမ်းပြည်သူများ မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ ပြည်ထောင်စုကမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်သော သျှမ်းတိုင်းရင်းသားပါတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတခု ဧကန်မုချဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာ သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့က မြို့နယ် အသီးသီးရှိ ပြည်သူတွေထံကွင်း ဆင်းပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီးပြီ လို့သိရပါတယ်။ ပြည်သူ များရဲ့သဘောထားကိုလည်း အမှန်တကယ်သိ ရှိပြီးပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပါတီများလူမှုအဖွဲ့ အစည်း များလက်နက်ကိုင်သျှမ်းအဖွဲ့အစည်းများဟာ ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုလျစ်လျူမရှုဘဲ ပြည်သူတွေ ဖြစ်လိုတဲ့ဆန္ဒကို အတတ် နိုင်ဆုံးဖြည့် ဆည်းပေးစေလိုပတယ်။ မိမိတို့ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီသည်ဖြစ်စေ မကိုက်ညီသည် ဖြစ်စေ မိမိတို့က ခုန ကပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း မာန်မာနတရားတွေကို ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်း အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်လျောပေးကြဖို့တိုက် တွန်းလိုပါတယ်။ အခုဒီဆွေးနွေးပွဲကို သျှမ်းနီ တိုင်းလျဲန်များ တက်ရောက်လာတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ဘဲ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိ ပါတယ်။ တိုင်းလျဲန်တွေတက်လာတဲ့ အတွက်ဒီဆွေးဒနွေးပွဲဟာဖြင့် အနှစ်သာရပိုရှိလာပြီး ပိုပြီးအသက်ဝင်လာတယ်လို့ဆို လို့ရပါတယ်။ အမြဲတမ်းလဲ မျှော်လင့်ကြိုဆို ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီဆွေးနွေးပွဲ ကနေ ရှေ့အနာဂတ်ခရီးကို ဘယ်လိုပုံဘယ်လိုနည်း ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ကြရင်ပိုပြီးခိုင်မာလာမလဲ ပိုပြီးစည်းလုံးညီညွတ်လာမလဲဆိုတာ နည်းလမ်းရှာအကြံပြုပေးကြစေလိုပါတယ်။ ဒီကနေတဆင့်ခွဲ ဝေတာဝန်ယူမှုအပိုင်း မှာ ဘယ်ဌာနကိုဖြင့် ဘယ်သူ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ယူလုပ်ဆောင် သွားမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်အထိ ချမှတ်သွားနိုင်မယ် ဆိုရင် ဟာကွက်မရှိ တပြေးညီတိုး တက်လာမှာမလွဲပါဘူး။ တဦးပေါ်တဦး အပြန်အလှန်လေးစားမှု ညှိနှိုင်းမှု ပွင့်လင်းမှု အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီမှု တွေကနေတဆင့် ယုံကြည်မှုတွေကို ခိုင်မာစွာတည်ဆောက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ သျှမ်း တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း ကြားယုံကြည်မှုခိုင်ခိုင်မာမာ မတည်ဆောက် နိုင်သေးသရွေ့ ကျန်ညီနောင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက် ဖို့မဖြစ်နိုင််ပါဘူး။ ပထမအဆင့်မပြီးသေးဘဲ ဒုတိယအဆင့် ကိုတက်လှမ်းလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်လာတဲ့သျှမ်းတိုင်းရင်းသားအသီးသီးဟာ ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုငဲ့ညှာသောအားဖြင့် ခိုင်မာတဲ့ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ချမှတ်နိုင်မယ်လို့ လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်မိပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ တဦးအပေါ်တဦး မာန်မာနတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီး ဂိုဏ်းဃနစွဲ အဖွဲ့အစည်းစွဲထားခဲ့ပြီး အချင်းချင်းအားပြိုင်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းစာမျက်နှာ ကိုပြည်ဖုံးကားချပြီး သစ်လွင်တောက်ပတဲ့ တသက်နဲ့တကိုယ် တခါမှမကြုံ ဖူးသေးတဲ့ ပြည်သူတွေအားကိုး တကြီးမျှော်လင့် တောင့်တနေတဲ့ သမိုင်းစာမျက်နှာသစ်ကို ဝိုင်းဝန်းရေးသား အကောင်အထည် ဖော်သွားကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းပြောကြား ရင်းနဲ့ဘဲ နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
Joint Secretary, SNDP
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA ၏မိန့်ခွန်း
ရက်စွဲ ၂၀၁၂ခုနှစ် နို၀င်ဘာလ (၂၅)ရက်
လေးစားအပ်ပါသော ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းညီလာခံသို့ တက်ရောက် အားပေးချီးမြင့်ကြသည့် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ ၀န်ကြီးဦးစိုးသိန်းနှင့် တာဝန် ရှိလူကြီးမင်းများအားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်ခင်္ဗျား။
RCSS/SSA ၏မိန့်ခွန်းကိုဖတ်ကြားနေသော ဗိုလ်မှူးချုပ်ပေါင်ခေး
မူလက ကျနု်ပ်ကိုယ်တိုင် ဤညီလာခံကြီးကို တက်ရောက်မည်ဟု ရည်မှန်းထားသော်လည်း ကျနု်ပ်၏ ကျန်းမာရေးအခြေ အနေကြောင့် မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်ကို ခွင့်လွှတ်ပေးစေလိုပါ သည်။
ပြည်ထောင်စုကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားများ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စု ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို့ သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS)၏ အမြင်သဘော ထားများကို အချက် (၆) ချက်ဖြင့် တင်ပြလိုပါသည်။
၁။ ပြည်ထောင်စုကြီးကို (၈) ပြည်နယ်သို့မဟုတ် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း (၁၄)ခုပါ ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ပါက တိုင်းရင်းသားများအားလုံး လက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့ RCSS သည်လည်း ဖက်ဒရယ်မူကို လက်ခံပါသည်။ သို့သော် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များကို ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နှင့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျသော လွတ်လပ်ခွင့်များအား ပေးအပ်ရပါမည်။ ပြည် နယ်နှင့်တိုင်းများ၏ ၀န်ကြီးချုပ် များကို ဗဟိုအစိုးရမှ ခန့်အပ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပြည်သူလူထုမှ တိုက်ရိုက်ရွေးကောက် တင် မြှောက်ရပါမည်။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးတွင်လည်း အာဏာများကို တိတိကျကျ ခွဲခြားပြဌာန်း ပေး ရပါမည်။ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအစိုးရများမှ ဗဟိုအစိုးရ၏အာဏာများကို သတ်မှတ်ပေးရပါမည်၊ အာဏာမည်မျှပေးမည်ကို ပြည်သူများက အဆုံးအဖြတ်ပေးရပါမည်။ နိုင်ငံ တော်သမ္မတကိုလည်း ပြည်သူများမှ တိုက်ရိုက်ရွေးကောက် တင်မြှောက် ရပါမည်။
၂။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် များကို အခွင့် အရေးများ ပေးသင့်ပါသည်။ ခုနှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းနှင့် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို လမ်းပိတ်မထားသင့်ပါ။ အားလုံး လက်ခံနိုင်သည့် အခြေခံဥပဒေဖြစ်မှသာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအသွင် ပေါ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အတင်းအကြပ် ဒီမိုကရေစီကို မလို လားပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင် ရာ၌ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသား အစုအဖွဲ့များအား ပါလီမန်ပြင်ပတွင် လွတ် လပ်စွာပြင်ဆင်ခွင့် ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်များကို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အလိုက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အဖြစ်ထားရှိ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားမှ တိုက်ခိုက်လာပါက စုပေါင်းကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသား တပ်များအား ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်တွင် ပါ၀င်ခွင့်ပေးရပါမည်။ လက်ရှိတပ်မတော်ကို အားလုံး လက်ခံနိုင်သည့် တပ်မတော်ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ရပါမည်။ တပ်မတော် သည် နိုင်ငံရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ၀င်မစွက်ဖက်ဘဲ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံတော်တည်တံ့ခိုင်မြဲ ရေးကိုသာ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
၄။ သဘာဝအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည့် သယံဇာတများကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအစိုးရများအလိုက် လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်၊ ကုန်သွယ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အကျိုးခံစားခွင့် အပြည့်အဝရှိစေရမည်။ ပြည်နယ် နှင့်တိုင်းများမှ အခွန်အကောက် များအပေါ်တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရရံပုံငွေသို့ အချိုးကျ ညှိနှိုင်း၍ ထည့်ဝင်ရမည်။
၅။ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများတွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသည့် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ၏ ဘာသာ စကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာဓလေ့များနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဥပဒေပြဌာန်းပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပေးရပါမည်။
၆။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို အမြန်ဆုံးကျင်းပပေးရပါမည်။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရာတွင် လုံခြုံမှု၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုမှု၊ တန်း တူမှု၊ တဦးအပေါ်တဦးယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့် အသိအမှတ်ပြုမှု စသည့်အချက်များ ရှိရပါမည်။ အထင်အမြင်မှားခြင်း၊ အထက် စီးယူခြင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ အောင်မြင်သည်အထိ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားရ ပါမည်။ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွါးခြင်းကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။
နိဂုံးချုပ်အနေနှင့် စိတ်သဘောထားကျယ်ပြန့်လှသည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် ညီလာခံသို့ တက်ရောက် လာကြသည့် လူကြီးမင်းများအားလုံးကို ကျေးဇူးဥပကာရ အထူးတင်အပ်ပါသည်။ အားလုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်ဝပြောတိုးတက်ရေးအတွက် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်နိုင်ပါစေဟု ဆုမွန်တောင်းအပ်ပါသည်။
သျှမ်းတို့၏ ‘ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း’ ဆွေးနွေးပွဲ အလားအလာကောင်း
ရန်ကုန်၌ကျင်းပနေဆဲဖြစ်သော ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲအတွက် အားရကျေနပ်ဖွယ် ရှိကြောင်း သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ စိုင်းမောင်တင်က ပြောပါ သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဓါတ်ပုံရိုက်ကြစဉ်
“အားရကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ မနေ့က ဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုရင် အင်အား ၂၀၀ ကျော်ရှိတယ်။ ကျားဖြူပါတီ ကဘဲ ၃၀ ကျော်နေပြီလေ။ အကူရော တက်ရောက်နားထောင်သူရောပေါ့နော်။ ကျနော့် တသက်မှာ ဒီလိုဆွေးနွေးမှုမျိုး ဒီတခါဘဲတွေ့ဖူးတယ်။ တကယ်ကိုအားရကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ သျှမ်း တိုင်းရင်းသား အ ချင်းချင်း ကြား ယုံကြည်မှု ခိုင်ခိုင်မာမာ မတည်ဆောက် နိုင်သေးသရွေ့ ကျန်ညီနောင်တိုင်းရင်း သားတွေနဲ့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ” ဟု ကျားဖြူပါတီ၏ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး စိုင်းမောင်တင်က ပြောပါသည်။
ယမန်နေ့ကစတင်သော ဆွေးနွေးပွဲသို့ NDAA/ RCSS-SSA/ SSPP-SSA/ TNDP/SNDP/SNLD မှ ကိုယ်စားလှယ်များက အဖွဲ့မှပို့ပေးသော စာတမ်းများအသီးသီးဖတ်ပြီး ဥရောပ မြန်မာရုံးမှဒါရိုက်တာ စဝ်ဟန်ယောင်ဟွေ့၊ သျှမ်းစာပေ ဘာသာ ဗေဒ ပညာရှင် ဒေါက်တာစိုင်းဆန်ဖေတို့လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်သည်များကို ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ အစိုးရဘက်မှ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း နှင့် ဦးစိုးသိမ်း တို့ မှမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ကြကြောင်း အစည်းအဝေး တက် ရောက်သည့် ကျားဖြူပါတီအသိုင်း အဝိုင်းက ဆိုပါသည်။
“ ညနေပိုင်းမှာ အုပ်စုလေးတွေခွဲပြီး ဝေါ့ခ်ရှော့ပ်လုပ်ကြတယ်။ ဆန္ဒတွေကောက်ယူကြတယ်။ တက်ရောက်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒတွေအာ အားလုံးနီးပါး ထပ်တူကျနေတာကိုတွေ့ရတော့ အားရ စရာကောင်းပါတယ်။ လှပတဲ့ သမိုင်းစာမျက်နှာသစ် လို့တောင်တင်စားချင်တယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ငြင်းကြခုံကြတာ မရှိဘူး။ သမိုင်းကတောင်း ဆိုလာတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပြီလို့ ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ကျားဖြူပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် စဝ်ဆိုင်မိန်းက ပြောပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီ ငြိမ်းချမ်းရေးခန်းမ၌ Trust Building for Peace ‘ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း’ ဆွေးနွေးပွဲကို နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ယခုလ ၂၆ ရက် (ယနေ့) မှ ၂၈ ရက်အထိ ၃ ရက် ကျင်းပနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တက်ရောက်သူများမှာ သျှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်သော ကျားဖြူပါတီ SNDP ၊ ကျားခေါင်းပါတီ SNLD၊ သျှမ်းနီပါတီ TNDP ၊ သျှမ်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ဖြစ်သည့် RCSS/SSA ၊ SSPP/SSA နှင့်မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့တို့မှ အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင် များ အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ပထမဆုံး သမ္မတ ညောင်ရွှေစော်ဘွား သား စဝ်ဟန်ယောင့်ဟွေ့၊ ရန်ကုန်သျှမ်းစာပေယဉ်ကျေး မှုကော်မတီမှ ဒေါက်တာစိုင်းဆန်အိုက်၊ မြန်မာ့သမိုင်းသုတေသန ဥက္ကဌ ဟောင်း ဆရာစိုင်းအောင်ထွန်း၊ နိုင်ငံကျော် တေးရေး ဆရာ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် ၊ သျှမ်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှ နန်းချမ်တောင်း တို့အပါအဝင် ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် တက်ရောက်သည်ဟု သိရပါသည်။
KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောတာမလာဘော တာဝန်မှ အနားယူဖွယ်ရှိ
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောတာမလာဘော သည် တာဝန်မှ အနားယူ နှုတ်ထွက်တော့မည်ဟု သိရှိရသည်။
တနလာင်္နေ့မှ စတင်ကျင်းပသည့် KNU ၏ ၁၅ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ အဖွင့် မိန့်ခွန်းတွင် အသက် ၉၃ နှစ်အရွယ် စောတာမလာဘော က ၎င်း အနားယူ
တော့ မည့်အကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၁၄ ကြိမ်မြောက်ညီလာခံမှ စောတာမလာဘော
အား ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ရာမှ အသက်အရွယ်နှင့် ကျန်းမာရေးအရ
နှုတ်ထွက်ခြင်း ဖြစ်မည်ဟု အမည်မဖော်လိုသူ KNU ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
“သူက အရွေးမခံတော့ဘူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်။ သူက အသက်ကြီးပြီလေ။ မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ အခေါက်
တောင် သူ့ကျန်းမာရေးက ချူချာတယ်ဆိုတော့ သွားရေးလာရေးမှာ ခက်ခဲတယ်” ဟု မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
ယခုညီလာခံကို KNU ၏ တပ်မဟာ ရ နယ်မြေ၊ ဘားအံခရိုင်၊ လှိုင်ဘွဲ့မြို့နယ် လေးဝါးတပ်စခန်းတွင် ရက်သတ္တပတ်
နှစ်ပတ်ကြာ ကျင်းပမည်ဖြစ်၍ ညီလာခံ ပထမနေ့တွင် ဗဟိုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာများ၊ နိုင်ငံရေး အစီရင်ခံစာများကို တင်သွင်းခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
ညီလာခံ နောက်ဆုံးနေ့တွင် KNU ၏ ခေါင်းဆောင်သစ်များကို ရွေးချယ်ရန် ပြင်ဆင်ထားသည်ဟု သိရသည်။
KNU မှ ထုတ်ပယ်လိုက်သည်ဟု ကြေညာခြင်း ခံရသော စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးဆေးဖိုး အား ညီလာခံ ကျင်းပချိန်ထိ မူလတာဝန်ကိုသာ ဆက်လက် တာဝန်ယူသွားမည် ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလက ကွယ်လွန်သူ KNU တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး (၂)လည်း ဖြစ်၊ ဗဟို တရားရေးဌာန တာဝန်ခံ ပဒိုစောဒေးဗစ်ထောနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဌာန တာဝန်ခံ ပဒိုရောဂျာခင် နေရာများတွင် အစားထိုးရန် လိုအပ်ဆဲ ဖြစ်သည်။
မူတူးဆေးဖိုးနှင့် ၎င်းတို့ နှစ်ဦးအား ဘားအံ့မြို့ ဗဟိုဆက်သွယ်ရေးရုံးဖွင့်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
KNU သည် နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ကျော်ကြာ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ရရှိရေးအတွက် အစိုးရ ခေတ်အဆက်ဆက် လက်နက်ကိုင်
တော်လှန်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ သည်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှု မလိုက်နာလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေး ပျက်နိုင်
ရှမ်းခေါင်းဆောင်များနှင့် ဦးအောင်မင်းအဖွဲ့ ဓာတ်ပုံ တွဲရိုက်ကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ – မေငယ်)
အစိုးရ တပ်မတော်အနေဖြင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုများကို လိုက်နာခြင်းမရှိပါက ငြိမ်းချမ်းရေး ပျက်ပြယ်သွားနိုင် သည်ဟု ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီ/ရှမ်းပြည် တပ်မတော် (RCSS/SSA) က ယမန်နေ့တွင် ပြောဆိုလိုက်သည်။
အစိုးရနှင့် ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်း(SSA-S) တို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည်မှာ တနှစ်ပြည့် နီးပါးရှိ ချိ န် အထိ တိုက်ပွဲပေါင်း ၅၀ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းလည်း RCSS/SSA ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော် မတီမှ ဦးစဝ်ပေါင်ခေး က ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင် နှင်းဆီခန်းမ၌ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်က ကျင်းပသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲ တွင် ထိုသို့ ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ နှစ်ဘက်က အပြန်အလှန် သဘောတူညီမှုကို မလိုက်နာရင် မလိုလားအပ်တဲ့ နှစ် ဘက် တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာလည်း အခက်အခဲကြုံတွေ့နိုင်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုလည်း ပျက်ပြယ်နိုင်တယ်”ဟု ဦးစဝ်ပေါင်ခေးက ပြောဆိုသည်။
ပြည်သူလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအသီးသီး လွတ်လပ်စွာအကြံပြုဆွေးနွေးနိုင်မှသာလျှင် ဒီမိုကရေစီနည်းကျကာ ထာဝရ တည်တံ့ ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင်ရန် အဖြေများရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရာတွင်လည်း ပိုမို အဓိပ္ပာယ် ရှိလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ထည့်သွင်း ပြောဆိုသွားသည်။
ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ဥက္ကဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးကလည်း“ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားတဲ့ ရှမ်းပြည်သူတွေစုဝေးပြီး ကျင်း ပတဲ့ ပွဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ကြံုတွေ့နေရတဲ့ တိုင်းရင်းသားပြဿနာ အဓိကဖြစ်နေတယ်။ ပြဿနာတွေပြေလည်ဖို့ ဆိုရင် စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ဖို့ တန်းတူညီမျှဖို့ စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို့ လို အပ်တယ်။ အချင်းချင်း ယုံကြည်မှုရှိဖို့လည်း လိုအပ်တဲ့အတွက် ဒီအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ရတာပါ”ဟု ပြောကြားသည်။
ယခု ကျင်းပသည့် ညီလာခံမှ စ၍ ရှမ်းပြည်နယ် တခုလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေရန် နှင့် ပြည်ထောင်စု တဝန်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးတို်င်ပင်ကြရမည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ယင်း ညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာသည့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီ ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်း ကလည်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောသည့်အတိုင်း အခြေခံမူဖြစ်သည့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး မရှိဘဲ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ထူထောင်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီမရှိဘဲ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို မဖော်ဆောာင်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုအောက်မှာပဲဆွေးနွေး ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် သံသယ မာန်မာန တွေချပြီး တော့ ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နိုင်မှ ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေလည်း တည် ဆောက် မယ်။ ပြီးတော့ ဒုတိယ အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်မယ်”ဟု ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီပါတီ(SNDP) တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုင်မောင်တင် ကလည်း ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် အစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများအကြား ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး ရှုထောင့်အမြင်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင် ရာတွင် ပါဝင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ စသည်တို့ကို အဓိကထား ဆွေးနွေးသွားသည်။
ထို ညီလာခံသို့ ဒုတိယ သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း တက်ရောက်လာခြင်း မရှိကြောင်း၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးများ ဖြစ်သည့် ဦးအောင်မင်း၊ ဦးစိုးသိန်း၊ အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီထားသည့် ရှမ်းလက်နက်ကိုင် ၄ ဖွဲ့၊ ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီ ၃ ခု၊
ရှမ်း စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ၊ ရှမ်းလူမှုအဖွဲ့အစည်း စုစုပေါင်း ၁၂ ဖွဲ့နှင့် ပြည်ပ ပညာရှင်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက် လာကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် အစိုးရနှင့် SSA-S တို့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး သဘောတူညီချက် ၁၂ ချက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးနောက် ရက်ပိုင်းအတွင်း တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားမှုအတွက် အစိုးရ စစ်တပ်မှ ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းက SSA-S သို့ တရားဝင် တောင်းပန်ခဲ့သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း
Monday, November 26, 2012 မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံ ပါဝင်တက်ရောက်ကြသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲတခုကို ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီ စားသောက်ဆိုင် သီရိခန်းမ၌ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့ နံနက် ၈းဝဝ နာရီမှ ၁၀း၃၀ အချိန်ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီပါတီ(SNLD) ဥက္ကဌ ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ပါတီ (SSPP/SSA) နာယက စပ်ဆေထင်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(SNDP)မှ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး စိုင်းမောင်တင် ၊ တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (TNDP)မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးစောဝင်းထွန်း၊ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးကောင်စီ(RCSS/SSA)မှ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် စပ်ပေါင်ခေးတို့ အပါအဝင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ တက်ရောက် ပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲကို နိုဝင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့မှ ၂၈ရက်နေ့အထိ ၃ရက်ကြာ ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဖက်ဒရယ်အရေး လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန် သျှမ်းညီလာခံ၌ ဦးအောင်မင်းပြော
ယနေ့မနက် ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီ ငြိမ်းချမ်းရေးခန်းမ၌ စတင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက် ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း တက်ရောက်ခြင်းမရှိ ၊ ဦးအောင်မင်းကပင် ဖက်ဒရယ်နှင့် ပတ်သက် ၍ လက်တွဲရန် တိုက်တွန်းပြောဆို သွားကြောင်း ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဝင် လူငယ်တဦးကပြောပါသည်။
“ ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း မတက်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူး။ ကျနော်တို့ ကျားခေါင်းပါတီ ဥက္ကဌ စဝ်ခွန်ထွန်းဦး ကဘဲ အစည်းအဝေးဖွင့်လှစ်ပေးတယ်။ အမှာစကားပြောတယ်။ ဦးအောင်မင်း တို့လဲ တက်ရောက်တယ်။ သျှမ်းခေါင်းဆောင်တွေ သျှမ်းလူငယ်တွေနဲ့ ဓါတ်ပုံတွဲ ရိုက်တယ်။ မိန့်ခွန်းပြောသွားတယ်” ဟု အဆိုပါလူငယ် ကပြော ပါသည်။
သျှမ်းခေါင်းဆောင်များနှင့် ဦးအောင်မင်းအဖွဲ့ ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ကြစဉ်
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီ ငြိမ်းချမ်းရေးခန်းမ၌ Trust Building for Peace ‘ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း’ ဆွေးနွေးပွဲကို နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ယခုလ ၂၆ ရက် (ယနေ့) မှ ၂၈ ရက်အထိ ၃ ရက် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်သူ ၁၅၀ ဝန်းကျင်ရှိပြီး ဦးအောင်မင်းကလည်း တက်ရောက်အမှာ စကားပြောခဲ့ကြောင်း ဆိုပါသည်။
“ ဦးအောင်မင်းကတော့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကို ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းသွားတယ်။ ကျနော်တို့ ဖိတ်ထား တဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ခေါင်းဆောင်တွေ အဖွဲ့အစည်းတွေ သျှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ သျှမ်းအမျိုးသမီးပူး ပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး SWAN၊ သျှမ်းလူငယ့်အင်အား SYP စတာတွေ တော်တော်များများလာကြတယ်။ တသီးပုဂ္ဂလတွေ တော့ အနည်းအကျဉ်းဘဲလာတာ” ဟုဆိုပါသည်။
သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် နားလည်မှုလွဲခဲ့သော ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်ကဲ့သို့သော ကိစ္စမျိုးကို မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး
နားလည်လက်ခံသော အဓိပ္ပာယ်ရရှိဆောင်ရွက်ခြင်းကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်မျိုး၊ အာဏာခွဲဝေမှုကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်မျိုး၊ သယံဇာတခွဲဝေမှုကိစ္စရပ်မျိုးကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းများကို ဦးစွာပထမရှင်းလင်းရန် လိုအပ်သည်ဟု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု အဖွဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်ဟု 7Day News Journal ကရေးသားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းလျဲန်ပါတီ ဥက္ကဌ စိုင်းဌေးအောင်က “ ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲက လုပ်သင့်တာ တော်တော်ြကာနေပြီ။ ကျနော်တို့ သျှမ်းလူမျိုးအတွက် နောက်တောင်ကျနေပြီ လို့ပြောရမယ်။ စစ်ဖြစ်တာက သျှမ်းတွေအနေများတဲ့ဒေသ။ ဒါပေ မယ့် စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့တော့ ဒီအစည်းအဝေးတခုတည်းနဲ့ ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေလို အပ်ချက်က အများကြီးဘဲ။ အခုလို ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို မကြာခဏလုပ်သင့်တယ်။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးက လွတ်လပ်ရေး ရပြီးမှ ဖြစ်လာတာဘဲ။ အလကားတိုက်ချင်လို့ တိုက်တာမှမဟုတ်တာ။ ဆုံးရှုံးနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေပြန်ရချင်လို့ တိုက်နေတာဘဲ” ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့်အား ပြောပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင်း၌ ပြည်တွင်းပြည်ပသျှမ်းအဖွဲ့အစည်း၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုမှာ ယခုပထမဆုံးအကြိမ် တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ထိုးစစ်ကို KIA လက်ခံမည် မထင်
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) နှင့် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့တို့သည် တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားရာမှ (၂) ရက်ခန့် ငြိမ်သက် နေကြောင်း KIA စစ်ရုံးချုပ်မှ အရာရှိ တစ်ဦး က ပြောပါသည်။
“ တိုက်ပွဲငြိမ်သွားတာက ကျနော်တို့နဲ့ အစိုးရ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးနဲ့ ဆိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အစိုးရဘက်က တပ်အင် အားတွေလဲတယ်။ လက်နက်တွေ၊ ရိက္ခာတွေ၊ တချို့နေရာဆိုရင် တပ်အင်အားတွေ ထပ်ဖြည့်နေတာ တောက်လျှောက် ပါပဲ။ အခုဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လကနေ တပ်ရင်းပေါင်း (၁၀၀) ကနေ အခု (၁၃၀) ရင်း လောက်ရှိ သွားပြီးလေ။ အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ကို တိုက်ဖို့ အသင့်ပြင်ထားတဲ့ သဘောပါ။” ဟု ဆိုပါသည်။
KIA တပ်မဟာ (၅) ဒေသဖြစ်သော လိုင်ဇာ ဗဟို ဌာနချုပ်ဂွင်တွင် အစိုးရ တပ်ရင်းပေါင်း (၁၈) ရင်းခန့် ဖြန့်ကျက်ထားပြီး၊ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ အထက်ပိုင်းရှိ KIA တပ်မဟာ (၁) ဒေသတွင် ပြီးခဲ့သည့် လဆန်းပိုင်းက အစိုးရ တပ်အင်အား (၁၅၀၀) ခန့် တိုးချဲ့ ချထားခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ဧရာဝတီမြစ် အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိ KIA တပ်မဟာ (၂) ဒေသတွင် နိုဝင်ဘာ လဆန်းပိုင်း အထိ တိုက်ပွဲများ ငြိမ်းသက်လျက် ရှိရာမှ နိုဝင်ဘာ (၁၃) ရက်နေ့တွင် အစိုးရ ဘက်မှ ရိက္ခာနှင့် တပ်အင်အား ထပ်ဖြည့်သည့် အစီစဉ်ကြောင့် တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွား ခဲ့ပါသည်။
“တပ်အင်အားနဲ့ တက်မလာဘူး ဆိုရင် တိုက်ပွဲဖြစ်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ အင်အားနဲ့ လာတော့ ကျနော်တို့ ဘက်က ပြန်လည်ခုခံတဲ့ အနေနဲ့ တိုက်ရတယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အကျအဆုံး တချို့နဲ့ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ခဲ့တယ်” ဟု တပ်မဟာ (၂) မှ တပ်မှုးတစ်ဦး ကဆိုပါသည်။
ဗန်းမော် ခရိုင်တွင် ရှိသော KIA တပ်မဟာ (၃) ဒေသနှင့် ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်းရှိ KIA တပ်မဟာ (၄) ဒေသတို့သည် တိုက်ပွဲများ နေ့စဉ် ဖြစ်ပွားနေသော ဒေသ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဆဒုံးမြို့တွင် လှုပ်ရှား နေသော ခမရ (၄၁၆) တပ်ဖွဲ့တို့သည် နိုဝင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် KIA တပ်စခန်း ရှိရာ လပွမ်ဘွမ်သို့ ၈၈ မမ စိန်ပြောင်းဖြင့် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
အလားတူ နာဖေါ့တပ်စခန်း အခြေချ ခလရ (၁၀၅) တပ်ဖွဲ့တို့သည် KIA တပ်စခန်း ရှိရာ ကမူနန် စခန်းသို့ ၈၁ မမ စိန် ပြောင်းဖြင့် (၆) ကြိမ် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ကားမိုင်းမြို့နယ် ကောင်ရာ ကျေးရွာတွင် လာရောက် နေရာယူ တပ်စွဲထားသော ခမရ (၁၃) တပ်ဖွဲ့တို့သည် KIA တပ်စခန်း ရှိရာ ခိုင်တောင်ဘက်သို့ ၈၁ မမ စိန်ပြောင်းဖြင့် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ဤကဲ့သို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် နေရာအနှံ့ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှ ကချင်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံး တိုက်ခိုက်မှုများ (၂)ရက် တာ ငြိမ်သက် သွားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် အစိုးရတပ် စစ်ကြောင်းများသည် နေရာအနှ့ံ ဆက်လက် လှုပ်ရှားနေလျှက် ရှိပါသည်။
အစိုးရနှင့် KIO တို့သည် ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့သော် လည်း ဘာသဘော တူညီမှုမှ မရခဲ့ပေ။ နိုဝင်ဘာလမကုန်မှီ နိုင်ငံရေး အရ KIA နှင့် ဆက်လက် ဆွေးနွေး လိုကြောင်း အစိုးရ ဘက်မှ ကမ်းလှမ်း ထားမှု ရှိသော်လည်း တဖက်တွင် တပ်အင်အား၊ ရိက္ခာ၊ စစ်ပစ္စည်း လက်နက်မျိုးစုံ ဖြည့်ဆည်းလျက် ရှိပါသည်။ ဤသည် ဆွေးနွေးပွဲကို အကြောင်းပြုပြီး စစ်ရေး ပြင်ဆင်ချိန်ကို ရရှိရန် ကျင့်သုံးသည့် နည်းပရိယာယ်ဟု စစ်ရေး အကဲခတ်များက ဆိုပါသည်။
ထို့အပြင် အစိုးရသည် KIA နှင့် နိုင်ငံရေး အရ ဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်ပေါ် လာစေရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် သွားမည်ဟု ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့၌ သမ္မတရုံးမှ ထပ်မံ သတင်း ထုတ်ပြန် ထားပါသည်။ ဤသို့ကြောင့် ဤအခြေအနေ အတိုင်းသာဆိုလျှင် အစိုးရ ဆင်ထားသည့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပရိယာယ်ထဲသို့ KIA ဆင်းသက်လိမ့်မည် မဟုတ်ဟု အများက ယူဆပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဂုဏ်ယူ
အာဆီယံ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ချုပ် သက်တမ်းအတွင်း ဂုဏ်အယူဆုံးကိစ္စ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အာဆီယံရဲ့ အခန်းကဏ္ဍပဲဖြစ်ကြောင်း မကြာမီမှာ ရာထူးက အနားယူတော့မယ့် ဒေါက်တာ ဆူရင် ပစ်ဆူဝမ် က ပြောလိုက်ပါတယ်။
အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဆူရင် ပစ်စူဝမ်
ဆူရင် ပစ်ဆူဝမ် ရဲ့ အာဆီယံ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်သက်တမ်းဟာ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလမှာ (၅) နှစ် ပြည့်မှာဖြစ်ပြီး၊ ဗီယက်နမ်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လီလျောင်မင်း (Le Luong Minh) က သူ့နေရာ ကို လွှဲပြောင်း ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်မုန်းတိုင်းအပြီးမှာ အထီးကျန် မြန်မာနိုင်ငံကို အနောက်ကမ္ဘာနဲ့ နီးစပ်အောင် ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အကြောင်း ပြောဆိုရာမှာ
"အဲဒီတုံးက မြန်မာနိုင်ငံဟာ အသွင်တစ်မျိုးပါ၊ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကမ္ဘာကြီးကို ကျနော်တို့ ယူဆောင်ခဲ့တယ်၊ ကုလသမဂ္ဂကို ခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်၊ မြန်မာအစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်း စိုးရိမ်စိတ်လျော့ပါးအောင်၊ ပြည်သူတွေ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်သွားအောင် အာဆီယံက ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ ကမ္ဘာကလည်း အရင်လို မျက်နှာထားမတင်းတော့ပါဘူး၊ အဲဒီနောက်ပိုင်း မြန်မာပြည် ပွင့်သွားတာဟာ အာဆီယံအတွက် အင်မတန် အာရကျေနပ်စရာကောင်းလှပါတယ် "လို့ သြစတေးလျ ABC သတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား ပြဿနာ ပြေလည်ဖို့ ဖယ်ဒရယ်စနစ်လို
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကကျတဲ့ လက်ရှိပြဿနာတခုဟာ တိုင်းရင်းသားပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့ အခုလို ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နေရတာဟာ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု စစ်စစ်မရှိတာကြောင့်လို့ မနေ့ကစပြီးကျင်းပတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ မှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးခွန်ထွန်းဦး ကပြောပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းကလည်း ရှေ့ဆက် ဆွေးနွေး သွားမဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဆွေးနွေး အဖြေရှာမှုတွေကို ရှေ့တန်းတင်သွားမယ် လို့ ပြောပါတယ်။ အကြောင်းစုံကိုတော့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းထောက် ကိုအောင်ရဲမောင်မောင်က ပြောပြပေးထားပါတယ်။
ဒီကနေ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးစီးပြီး ကျင်းပတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ မှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ တက်ရောက်လာသလို၊ အာဏာပိုင်တွေဘက် ကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု ပြုလုပ်နေတဲ့ ၀န်ကြီး ၂ ပါး ဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်မင်းနဲ့ ဦးစိုးသိန်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ လက်ရှိ တိုင်းရင်းသား ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နေရတာဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တစ်ရပ် မရှိတာကြောင့်လို့ ဦးခွန်ထွန်းဦး က ပြောကြားလိုက် ပါတယ်။
“လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အကျပ်အတည်းအကြောင်းတရားက အဓိက တိုင်းရင်းသားပြဿနာက အဓိကဖြစ်နေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားပြဿနာပြေလည်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ဒီနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အတူ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိဘဲ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။”
သမိုင်း အဆက်ဆက် နားလည်မှုလွဲခဲ့ သော ဖက်ဒရယ် ကိစ္စကို အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင် နားလည်ထားတဲ့ ဖယ်ဒရယ်ပုံစံတွေကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ပြီး ရှေ့လာမဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ဆွေးနွေး ကြရင် ပိုပြီး သင့်တော်၊ ကောင်းမွန်မယ်လို့ သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း ကပြောပါတယ်။
“ဥပမာ သမိုင်းတလျောက်လုံးတွင် နားလည်မှုလွဲခဲ့သော၊ ဖက်ဒရယ်ကိစ္စရပ်များကို မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး နားလည်လက်ခံသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှု ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်မျိုး ၊ ပါဝါရှယ်ယူသောကိစ္စရပ်များကို အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ Resource ရှယ်ယူသော ကိစ္စရပ်ကို အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ Government နဲ့ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းတို့ကို ဦးစွာပထမ ရှင်းလင်းကြရန် ကြိုးပမ်းကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။”
ရှေ့ဆက်ပြီး လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးမဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ နိုင်ငံရေး နည်းလမ်း နဲ့ ဆွေးနွေးတာ တွေကို အသားပေး လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်း သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ပြောပါတယ်။
“ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေခြင်းများသည် အရေးကြီးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် မိမိနိုင်ငံ၊ မိမိလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ရရှိထားသော နိုင်ငံရေးဖြစ်ထွန်းမှုများနှင့် ကိုက်ညီသည့် သီးခြားတည်ဆောက်ထားနိုင်သည့် ပုံစံဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်မှသာလျင်၊ အောင်မြင်မှုများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပဲ အင်အားကြီးတဲ့ လူမျိုးတွေက အင်အားနည်းတဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေအပေါ်မှာ ဖိနှိပ်တာ၊ တန်းတူအခွင့်အရေးကို ပိတ်ပင်တာ၊ ရက်စက်မူတွေ ရှိိနေတဲ့ကိစ္စကိုလဲ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်လို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးက ပြောပါတယ်။
“အင်အားကြီးတဲ့လူမျိုးက အင်အားသေးတဲ့လူမျိုးကို ဖိနှိပ်တာ၊ လူမျိုးတမျိုးရဲ့တန်းတူအခွင့်အရေးကို မပေးတာ၊ လူမျိုးတမျိုးက ခြိမ်းခြောက်တာ၊ ဖိနှိပ်ရက်စက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာလည်း အခုတိုင်းပြည်မှာ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။”
တိုင်းပြည် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုတွေက သူတို့ မျိုးနွယ်စု အမှတ်လက္ခဏာတွေကို တည်ဆောက်ပြီး အဲ့ဒီ အမှတ်အသားတွေကနေ တစ်မျိုးသားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဘုံအမှတ်အသားတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့လည်း ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းက ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
အစောပိုင်းတုန်းက ဒီပွဲကို ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း တက်ရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ ဒီကနေ့မှာတော့ တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက် အခမ်းအနားမှူးက တက်ရောက်လာသူတွေကို တောင်းပန်ခဲ့တာလည်း ကြား ရပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲမှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီတွေဘက်က ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(SNLD)၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNDP)၊ ရှမ်းနီအမျိုးသား များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ (TNDP) တို့ တက်ရောက်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းက လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေးပါတီ(SSPP/SSA)၊ ရှမ်းပြည် ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးကောင်စီ (SSA/RCSS)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်တပ်မတော် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း (NDAA) တို့ တက်ရောက်ခဲ့တာ ကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီကနေ့က စပြီး ရန်ကုန်မှာ သုံးရက်ကြာပြုလုပ်မဲ့ ဒီပွဲမှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း ၊ရှမ်းတိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူထု အခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေအကြား မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည််မှုတည်ဆောက်ရေး ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးမှာဖြစ်သလို ရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့ ဒေသတွင်းဖွံဖြိုးရေးတွေ အပါအဝင် ဘာသာ၊ စာပေကိစ္စတွေကိုလည်း အဓိကထား ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပထမအဆင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ စုပေါင်းပြီး ၃ ရက်ကြာ ကျင်းပမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ညီလာခံကို ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင် တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမမှာ စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Photo:RFA/Sai Htun Aung Lwin
နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမမှာ ကျင်းပတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ညီလာခံမှာ SNLD ပါတီဥက္ကဌ ဦးခွန်ထွန်းဦး မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့အကျပ်အတည်းတွေထဲမှာ အဓိကဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ အရေးကြီးကြောင်း ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးက ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကို ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ရက်ကနေ ၂၈ရက်နေ့ထိ ၃ရက်ကြာ ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပြီး ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးပွဲကို အမှတ်(၂) လျပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုး၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့ ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းတို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးက တာဝန်ရှိသူတွေ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းက ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ရှမ်းလူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပညာရှင်တွေ အပါအဝင် လူဦးရေ (၂၅ဝ) နီးပါး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ညီလာခံကို တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ ဥက္ကဌ ၊ သမ္မတရုံး ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းပတဲ့ ညီလာခံအကြောင်း RFA သတင်းထောက် မဇင်မာဝင်းက တင်ပြထားပါတယ်။
မငြိမ်သက်မှုကြား ဖားကန့်တွင် KIA ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲတော် ပြုလုပ်
ဖားကန့် KIA တပ်ရင်း ၆ ကောက်သစ်စားပွဲတော်။ ဓါတ်ပုံ - KNG ကချင်သတင်းဌာန
မြန်မာအစိုးရနှင့် တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေသည့် ဖားကန့်မြို့နယ်တွင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA တပ်မဟာ (၂) တပ်ရင်း (၆) နယ်မြေ ဂင်ဆီဆိုင်းရာ (Ginsi Seng Ra) တွင် ကောက်သစ်စား ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲတော် ကို နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက် စနေနေ့တွင် ရောတ်ဝန်လီး (Rawt Wun Li) ခန်းမတွင်ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေချိန်ဖြစ်သော်လည်း ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာများရှိသောကြောင့် ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း တပ်ရင်း (၆) တပ်ရင်းမှူး ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး အင်ခွမ်ဇော်ဒွဲမှ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်ဟု ပွဲတွင်ပါ၀င်သော ကျောက်ကုန်သည်တစ်ဦးပြောသည်။
“ခုချိန်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲကို အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလုပ်နိုင်သူတွေနဲ့ ရှေ့တန်းမှာ ရောက်ရှိနေသူတွေ အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတော်ချိီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်။ စစ်ပွဲတွေ ဘယ်လောက်ထိ ပြင်းထန်နေပါစေ၊ နိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပါစေ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကောင်းချီး ကျေးဇူးမင်္ဂလာကို တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပိုပြီးခံစားရတယ်။ အောင်ပွဲတွေခံစားခွင့်ရတယ်။ ငွေကြေးတွေလည်း ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းတဲ့အချိန်ထက် ပိုပြီးရရှိခံစားရတယ်။” ဟု ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ဒွဲမှ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သူကဆိုသည်။
အဆိုပါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲသို့ ဖားကန့်၊ ဆိုင်းတောင်၊ လုံးခင်း၊ ဂွေခါနှင့် ဥရုဆိုင်းမော်ဒေသမှ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဆရာများနှင့် ရိုးရာစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းများနှင့် ရပ်ကွက်လူကြီးများလာရောက်ခဲ့သည်။
ပွဲတော်သို့ လာရောက်ပါ၀င်သူများမှလည်း ချီးမွမ်းခြင်းပွဲတော်သို့ ပလိုင်း ၂၅၀ ဖြင့် အသီးသီး သစ်သီးဝံလံနှင့် ပူဇော်ပစ္စည်းများ ယူဆောင်လာခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ထိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသည့် အသီးအနှံများကို မြန်မာစစ်တပ် ဖားကန့် ဗျူဟာမှူး၊ တပ်ရင်းမှူးများနှင့် ဥရုဆိုင်းမှော်မှ ခရစ်ယာန် သာသနာရေးဆရာများ၊ ဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ မြန်မာအစိုးရရုံးများ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးရုံး၊ အစိုးရ စာသင်ကျောင်းများနှင့် ရိုးရာစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ နေရာတိုင်းသို့ သစ်သီးတောင်းများကို ချစ်မေတ္တာဖြင့် မျှဝေခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဖားကန့် ဂင်ဆီဆိုင်းရာ(Ginsi Seng Ra) ရောတ်ဝန်လီး (Rawt Wun Li) ခန်းမတွင်ပြုလုပ်သော ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲတော်သို့ ဖိတ်ကြားထားသော ဒေသခံများစုပေါင်း အယောက် ၁၀၀၀ ကျော်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ယခုချိန်တွင် ဖားကန့်ဒေသတွင်း အစိုးရစစ်တပ်များ စစ်အင်အားတိုးချဲ့ကာ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအချိန်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်သော အချိန်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဒေသခံများပြောသည်။
ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေကို စောင့်ကြည့် ရမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆို
Sunday, November 25, 2012 မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်စစ်စစ် ဖြစ်ဖို့ ရိုးရိုးသားသား ဆောင်ရွက်နေသလားဆိုတာ အခြေခံဥပဒေ ကို ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေသလား ဆိုတာကို ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် လို့ အမျိုးသား ဒီမ်ိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ NLD ဝါရင့် နို်င်ငံရေးသမားကြီးများနှင့် အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသည့် နိုင်ငံရေး သမားများကို အန်အဲလ်ဒီပါတီက ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည့် အခမ်းအနားတွင် ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဂုဏ်ပြုစကား ပြောကြားနေစဉ်။ photo/NLD ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် Mainichi သတင်းစာရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု တစ်ရပ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အထက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားခဲ့တာပါ။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဟာ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပေါ်မှာ ရိုးသားမှုရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Mainichi သတင်းစာက မေးမြန်းရာမှာ ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖြစ်တယ်လို့ မပြောနိုင်သေးတဲ့ လက်ရှိအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဘယ်လို ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာ အသေအချာစောင့်ကြည့်ပြီး၊ သူ့ရဲ့ရိုးသားမှု ဆုံးဖြတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပေါ်မှာ အမှန်တကယ် အလေးအနက်ရှိတယ်ဆိုရင်၊ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရေး အတွက် အစီအစဉ်တွေနဲ့တကွ ရှေ့ကိုတက်လှမ်းဖို့ အလေးအနက် အားထုတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အစစ်အမှန်ဖြစ်ဖို့အတွက် အကြမ်းမဖက်ရေးမူဝါဒနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေအပြင် တခြားထိရောက်တဲ့ မဟာဗျူဟာတွေရှိပါသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ပြန်လည်ဖြေကြားရာမှာ ကျမတို့ဟာ အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းကိုပဲ အမြဲကျင့်သုံးသွားမှာပါ၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ အတော်များများရဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှုကို ကျမတို့ရရှိခဲ့ကြပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ဘာလိုအပ်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာက ကျမတို့မြန်မာလူထုအတွက် ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်၊ ကျမတို့ဟာ ပြင်ပကမ္ဘာကိုပဲ မှီခိုနေလို့မဖြစ်ပါဘူးလို့ ဒါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းတဲ့အခါ အဆိုတစ်ရပ်ကို ဘယ်သူကတင်သွင်းသည်ဖြစ်စေ၊ တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းကျိုးရှိမယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ အဆိုပြုချက်ဆိုရင် လက်ခံမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်အခံနဲ့ ကျမတို့ လွှတ်တော်ထဲမှာ အားလုံးစုပေါင်း ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်၊ အရာအားလုံးဟာ ကျမတို့ပါတီရဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့အပြည်အဝ ကိုက်ညီချင်မှကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်၊ စစ်မှန်တဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ကျမတို့မြှင့်တင်ကြရမှာပါလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ http://www.rfa.org/burmese/news/dassk-myanmar-democracy-11252012215514.html